3001s &quot;Caqiido Wax Ka Qabata Dhibaatooyinka&quot; Wadaag Rick Warren images and subtitles
- Salaan, qof walba, waxaan ahay Rick Warren, wadaadka kaniisada Saddleback iyo qoraa ee "Ujeedada loo Wado Gaadhiga Nolosha" iyo Hadalka barnaamijka "Daily Hope". Waad ku mahadsantahay soo-noqoshada barnaamijkan. Waad ogtahay, toddobaadkan halkan Orange County, California, dawladda ayaa ku dhawaaqday inay mamnuucayaan kullamada nooc kasta ha ahaadeene, nooc kasta ha ahaadeene ilaa dhamaadka bisha. Marka ku soo dhowow Kaniisada Saddleback ee guriga. Waan ku faraxsanahay inaad halkaan joogto. Oo waxaan ku bari doonaa fiidiyow inta u dhaxaysa hadda iyo markasta oo dhibaatadani COVID-19 ay dhammaato. Marka ku soo dhowow Kaniisada Saddleback ee guriga. Oo waxaan jeclaan lahaa inaan kugu martiqaado inaad i raacdid toddobaad kasta, qayb ka noqo adeegyadan cibaadada si wada jir ah. Waxaan heysanaa heeso iyo cibaado, oo waxaan soo bixin doonaa eray ka erayga Eebbe. Waad ogtahay, sidaan uga fikiray tan, dariiqa, marka hore waxaan u baahanahay inaan kuu sheego. Waxaan u arkaayay inay iyagu na joojinayaan kulanka. Oo sidaas toddobaadkan, waxaan lahaa Istuudiyaha Saddleback u dhaqaaqay garaashkeyga. Runtii tan waxaan ku garaacayaa garaashkayga. Shaqaalaha farsamada ee qalfoofkayga. Kaalay oo soo gala, wiilal, dhahaa qofkasta hiwaayadiisa. (qosol) Waxay gacan ka gaysteen inay u wareegaan halkan oo ay dejiyaan dhammaantood si aanu toddobaad kasta kugula hadli karno. Hadda, sida aan uga fikiray waxa aan qarin karno inta lagu guda jiro xiisaddan COVID-19, Isla markiiba waxaan ka fikiray kitaabka Yacquub. Buugga Yacquub waa buug aad u yar dhamaadka dhamaadka Axdiga Cusub. Laakiin waa mid wax ku ool ah isla markaana aad waxtar u leh, oo waxaan buuggan ugu yeedhay iimaan shaqaynaya kolka noloshu aanu shaqayn. Waxaanan isleeyahay in hada wax loobaahanyahay, Ma waxaan u baahanahay caqiido shaqeysa marka noloshu aysan shaqeyn. Sababtoo ah si fiican uma shaqeynayaan hadda. Oo sidaas, maanta, toddobaadkan, waxaan bilaabi doonaa safar wadajir ah oo ku dhiirigelin doona iyada oo loo marayo xiisaddan. Mana doonayo inaad seegto farriimahan midkood. Maxaa yeelay buugga Yacquub wuxuu dhab ahaan ka hadlayaa 14 waaweyn dhismayaasha xannibaadda nolosha, 14 arrimood oo muhiim ah oo nolosha ah, 14 meelood oo midkastoo idinka mid ahi uu yahay horeyba ula tacaashay noloshaada, waana inaad wax ka qabataa mustaqbalka. Tusaale ahaan, cutubka koowaad ee James, Bal aan wax yar ka siiyo dulucda buugga. Waa afar cutub oo keliya. Cutubka koowaad, wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatooyinka. Hadana maanta ayaan ka hadlaynaa. Waa maxay ujeeddada Ilaahay dhibaatooyinkaaga? Ka dib waxay ka hadlaysaa xulashooyinka. Sideed uga fikirtaa maskaxdaada? Sideed ku ogaaneysaa goorta aad joogtid, goorta la tagayo? Sideed ku ogaataa waxa la sameeyo, sideed u go'aan u gaartaa? Ka dibna waxay ka hadlaysaa jirrabaadda. Oo waxaan eegi doonaa sida aad uga adkaato jirrabaadaha caamka ah noloshaada oo umuuqda inay sii waddo inay kugu sii wado. Ka dibna waxay ka hadleysaa hagidda. Oo waxay ka hadleysaa sida aan ugu duceyn karno Kitaabka Quduuska ah. Kaliya ma aqrino, laakiin ha ku barakeeyo. Intaas oo dhan waa cutubka koowaad. Hadana waxaan eegi doonaa kuwa usbuucyada soo socda. Cutubka Labaad wuxuu ka hadlayaa xiriirka. Waxaan eegaynaa sida aad ula dhaqanto dadka. Iyo dadka ay tahay inay guriga joogaan dhamaan reerka wada jooga, caruurta iyo hooyooyinka iyo aabayaasha, dadkuna waxay kuxiran karaan dareemayaasha kale. Taasi waxay noqon doontaa fariin muhiim ah oo ku saabsan cilaaqaadka. Markaas waxay ka hadlaysaa iimaanka. Sidee ayaad runtii ugu kalsoonaataa Ilaah markii aadan sidaa ahayn iyo marka arrimuhu u socdaan jihada qaldan? Intaas oo dhan waa cutubka labaad. Cutubka saddexaad, waxaan uga hadli karnaa sheekooyinka. Awooda wada hadalka. Oo kanina waa mid ka mid ah aayadaha ugu muhiimsan Kitaabka Quduuska ah oo ku saabsan sida aad afkaaga u maamushid. Taasi waa muhiim haddii aan ku jirno qalalaase iyo haddii kale. Hadana waxay ka hadlaysaa saaxiibtinimada. Oo waxay na siisaa macluumaad aad wax ku ool ah sidaad u dhisaan saaxiibo xariif ah oo iska ilaali saaxiibtinimada aan caqliga lahayn. Taasi waa cutubka saddexaad. Cutubka afraad wuxuu ku saabsan yahay isku dhac. Iyo cutubka afaraad, waxaan uga hadlaynaa sidee looga fogaadaa doodaha. Taasna waxay noqon doontaa wax runtii caawimaad leh. Markii xiisadaha kor u kacayaan iyo jahwareerku sii kordhayo, maadaama dadku shaqada ka maqan yihiin, sidee baad uga fogaataan doodaha? Ka dibna wuxuu ka hadlayaa xukunka dadka kale. Sideed uga joogsaneysaa Cayaarta Eebbe? Taasi waxay noo horseedi doontaa nabad badan nolosheena haddii aan sidaas samayn karno. Ka dibna waxay ka hadlaysaa mustaqbalka. Sideed u qorsheyneysaa mustaqbalka? Intaas oo dhan waa cutubka afaraad. Haddaba, cutubka ugu dambeeya, cutubka shanaad, ayaan kuu sheegay waxaa jiray afar cutub, dhab ahaantii way jiraan shan cutub ee James. Waxaan kahadalnaa lacagta. Waxay kaloo ka hadleysaa sida caqligaaga u caqli badan. Kadibna waxaan eegaynaa dulqaad. Maxaad sameyneysaa markaad Ilaahay sugeyso? Qolka ugu adag ee lagu fadhiisto wuxuu ku jiraa qolka sugitaanka markii aad degdeg u degto oo Ilaahna ma aha. Kadibna waxaan eegaynaa salaadda, taas oo ah farriinta ugu dambaysa ee aan eegi doonno. Sideed u soo duceysaa dhibaatooyinkaaga? Baybalku wuxuu leeyahay hab lagu tukado oo loo helo jawaabo, oo waxaa jira hab aan loo tukan. Anaguna waanu eegaynaa taas. Hadda maanta, waxaan eegeynaa lixdii aayadood ee ugu horreeyay ee kitaabka Yacquub. Haddii aadan haysan Kitaabka Quduuska ah, ka dib waxaan rabaa inaad soo dejiso ka baxsan shabakaddaan dulucda, qoraalada barista, maxaa yeelay dhamaan aayadaha aan eegno Ma jiraan dulucdaada. Yacquub cutubka koowaad, lixda aayadood ee ugu horreeya. Oo Baybalku wuxuu leeyahay tan marka ay ka hadlayso inaad wax ka qabato dhibaatooyinkaaga. Marka hore, Yacquub 1: 1 ayaa leh sidan. Yacquub, oo ah addoonkii Ilaah iyo Rabbi Ciise Masiix, to 12ka qabiil ee ku kala firidhsan quruumaha dhexdooda, salaan. Haddaba, aan xoogaa halkaan joogno oo aan dhaho Kani waa hordhaca ugu halista badan ee buug kasta oo Kitaabka Quduuska ah. Sababta oo ah waad ogtahay cidda James ahaa? Wuxuu ahaa walaalkii nabi Ciise. Maxaad uga jeeddaa taas Waxay ka dhigan tahay inuu ahaa Maryan iyo ina Yuusuf. Ciise wuxuu ahaa wiilkii Maryan. Isagu ma ahayn wiilkii Yuusuf sababtiisii ​​Ilaah wuxuu ahaa aabaha Ciise. Laakiin Kitaabku wuxuu noo sheegayaa in Maryan iyo Yuusuf caruur badan bay dhaleen goor dambe, oo xitaa na siiya magacyadooda. James ma ahayn Masiixi. Isagu ma uusan ahayn mid raacsan Masiixa. Ma uusan rumeysan inuu walaalkiis barkiisa yahay Masiixa inta lagu gudajiray ciise dhammaantiis. Wuxuu ahaa nin shaki badan. Taasna waad moodaa, inan yar yahow rumaysan walaal weyn, sifiican, taasi waxay noqon laheyd wax qurux badan. Maxaa James ka dhigay inuu rumayste Ciise Masiix? Qiyaamaha. Markuu Ciise ka soo sara kacay dhimashadii oo socday 40 maalmood oo kale ayuu Yacquub arkay, wuxuu rumaystay ka dibna wuxuu noqday hogaamiyaha Kaniisadda Yeruusaalem. Markaa haddii qof uun xaq u lahaa inuu magacyo ku tuuro, waa ninkaan. Waa uu dhihi karay, James, ninka ku soo koray Ciise. Yacquub, walaalkiis nus Ciise. Yacquub, saaxiibkii ugu wanaagsanaa ee Ciise ee soo korayay. Waxyaabaha noocaas ah, laakiin isagu ma sameeyo. Wuxuu si fudud u leeyahay James, oo ah addoonkii Ilaah. Darajadiisa kor uma qaado, umana hormarinayo shaqadiisa. Laakiin markaa aayadda labaad, wuxuu bilaabayaa inuu galo arintaan oo ah tii ugu horeysey ee Eebbe ujeeddooyinkaaga ka mid ah. Aan kuu aqriyo. Wuxuu yidhi, markay jiraan noocyo kasta oo tijaabooyin ah Dad badan oo noloshaada gala, ha u xanaaqin sidii kuwo wax xadgudbaya, laakiin ku soo dhowow sidii saaxiibbadood. Ogaada inay u yimaadeen inay tijaabiyaan iimaankaaga, iyo inaan idinku soo saaro tayada adkaysiga. Laakiin ha sii socdo hawshaas illaa inta dulqaadkaas la gaadhay si buuxda ayaa loo horumariyey, oo waxaad noqon doontaa qof ee dabeecad qaan iyo daacadnimo oo aan lahayn dhibco daciif ah. Taasi waa tarjumaadda Phillips of James cutubka koowaad, aayadaha laba ilaa lix. Hadda, wuxuu leeyahay marka dhammaan noocyada tijaabooyinkaadu ay soo galaan noloshaada Isaguna wuxuu ku yidhi, Ha u sii jeedin sidii carqalad, ku soo dhowow sidii saaxiibo. Wuxuu dhahay, waxaad dhib ku qabeen, faraxsanow. Dhibaatooyin ayaa ku habsaday, ku reyreeya. Dhibaatooyin ayaa ku soo gaadhay, dhoola caddeyn. Hadda, waan ogahay waxa aad ka fekereyso. Waad tagaysaa, ma aniga ayaa iga xanaaqsan? Maxaan ugu faraxsanahay COVID-19? Maxay tahay sababta aan u soo dhaweynayo tijaabooyinkan noloshayda? Sidee taasi macquul u tahay? Furaha habdhaqankan oo dhan ee dayactirka dabeecad wanaagsan inta lagu jiro dhibaatada eraygu waa garow, waa erayga xaqiiqsada. Wuxuu yidhi, markay tijaabooyinka noocan oo kale ahi jiraan Dad badan oo noloshaada gala, ha u xanaaqin sidii kuwo wax xadgudbaya, laakiin u soo dhowow sidii saaxiibbadood, oo garo, oo garo, Waxay u yimaadaan inay tijaabiyaan iimaankaaga. Hadana waa uu sii wadaa, waxa noloshooda u soo saara. Waxa uu halkan ka leeyahay waa guusha aad ka gaadhay maaraynta usbuucyada inaga horreeya masiibada COVID-19 taasi waa hadda adduunka oo dhan, iyo inbadan iyo in ka badanba Quruumihii way xidheen, oo way iska xidheen makhaayadaha iyo waxay xirayaan bakhaarada, iskuuladana way xidhaan, Waxay xidhaan kaniisadaha, meel walbana way xidhaan halkaasoo dadku isugu yimaadaan, iyo sida halkan Orange County, Halka aan naloo oggolayn inaan cidna la kulanno bishan. Wuxuu yiri, guusha aad ka gaartay xallinta dhibaatooyinkaas waxaa lagu go'aamin doonaa fahamkaaga. Fahamkaaga. Iyo sidaad u aragto dhibaatooyinkaas. Waa waxa aad garato, waa waxa aad ogtahay. Haddaba, waxa ugu horreeya ee qoraalkan ku jira ee aan doonayo inaad gartaan waa in Ilaah ina siiyo afar xusuusin oo ku saabsan dhibaatooyinka. Waxaad jeclaan lahayd inaad kuwan qorto. Afar xusuusinood oo kusaabsan dhibaatooyinka noloshaada, kuwaas oo ay ku jiraan qalalaasaha aan hadda marayno. Midda koowaad, wuxuu leeyahay marka hore, dhibaatooyinka waa lama huraan. Dhibaatooyinka waa lama huraan. Hadda, sidee ayuu u leeyahay hadalkaasi? Wuxuu yidhi, goorta ay noocyo badan oo tijaabooyin ahi yimaadaan. Isagu ma yiraahdo haddii nooc kasta oo tijaabooyin ah ay yimaadaan, wuxuu dhahaa goorta. Waad ku kalsoonaan kartaa Tani maahan jannada meesha ay wax walba ku qumman yihiin. Tani waa Dunida oo wax walba lagu jebiyo. Isaguse wuxuu dhahayaa waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyin, dhibaatooyin ayaa kugu dhici doona, waad ku kalsoonaan kartaa waad ka iibsan kartaa saamiyada dhexdeeda. Hadda, tani maahan wax uu James kaligiis yiraahdo. Dhamaan Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegaya. Ciise wuxuu yiri adduunyada waxaad ku arki doontaa tijaabooyin iyo jirrabaadda, oo waxaad heli doontaan dhib. Wuxuu yiri waxaad nolosha ku yeelan doontaa dhibaatooyin. Marka maxaan u la yaabnay markaan dhibaatooyin nahay? Peter wuxuu yidhi ha la yaabin marka aad dhex marto tijaabooyin adag. Wuxuu yiri ha u dhaqmin sidii inay tahay wax cusub. Qof walbaa wuxuu soo maraa waqtiyo adag. Noloshu way adag tahay. Tani ma aha jannada, tanina waa Dunida. Cidna isma difaaci karo, cidna lama go'doomin, qofna kuma xirna, cidna lagama dhaafo. Wuxuu dhahaa waxaad dhib kala kulantid maxaa yeelay waa lama huraan. Waad ogtahay, Waxaan xasuustaa hal jeer markii aan kulleejada ku jiray. Sanado badan kahor, aniga ayaa soo marayay waqtiyo runti adag. Oo waxaan bilaabay salaadda, waxaan idhi, "Ilaahow samir ii dulqaado." Oo halkii tijaabooyinku ay ka sii fiicnaanayaan, way ka sii daayeen. Markaasaan idhi, "Ilaahow, waxaan u bahanahay samir," Dhibaatooyinkuna way sii xumaadeen. Markaasaan idhi, "Ilaahow, waxaan u bahanahay samir," wayna ka sii daayeen. Maxaa socday? Hagaag, ugu dambeynti waxaan gartay in ku dhawaad ​​lix bilood kadib, Waxaan ahaa qof samir badan oo ka badan markii aan bilaabay, in habka Ilaah i baray samir wuxuu soo maray dhibaatooyinkaas. Hadda, dhibaatooyinku ma aha qaar nooc koorsada doorashada ah Inaad doorato noloshaada. Maya, waa loo baahan yahay, kama bixi kartid iyaga. Si looga qalinjabiyo dugsiga nolosha, waxaad ubaahantahay inaad gasho iskuulka garaacista adag. Dhibaatooyin ayaad la kulmi doontaa, iyagu waa lama huraan. Taasi waa waxa Kitaabka Quduuska ahi leeyahay. Waxa labaad ee Kitaabka Quduuska ahi ka leeyahay dhibaatooyinka waa tan. Dhibaatooyinku waa kuwa is bedbeddelaya, taas macnaheedu waa isku wada mid maaha. Dhibaatooyin isku mid ah kuma wada heysatid midba midka kale. Waxaad ka heleysaa kuwo badan oo kala duwan. Kaliya maahan inaad hesho, laakiin waxaad helaysaa kuwo ka duwan. Wuxuu dhahaa markaad tijaabinaysid, markii aad dhibaatooyin isku nooc ah leedahay. Waad wareegi kartaa taas haddii aad qoreyso qoraal. Markay dhammaan noocyada tijaabooyinkaadu soo galaan noloshaada. Waad ogtahay, inaan ahay qof beerta ka shaqaysta, marna baan bartay, oo waxaan ka ogaaday in dawladda halkan ee dalka Mareykanka ayaa loo kala saaray 205 noocyo kala duwan oo ah haramaha. Waxaan u malaynayaa in 80% iyaga ka mid ah ay ku koraan beertayda. (qosol) Waxaan inta badan u maleynayaa in marka aan korayo khudradda, Waxaan ku dallacayaa gelitaanka Warren's Weed Farm. Laakiin waxaa jira noocyo badan oo iniin ah waxaa jira noocyo badan oo tijaabooyin ah, dhibaatooyin badan ayaa jira. Waxay ku yimaadaan cabbir walba, waxay ku yimaadaan qaab kasta. Waxaa jira in ka badan 31 dhadhan. Ereygan halkan, nooc kasta, halka uu leeyahay noloshaada waxaa kujira nooc kasta oo tijaabo ah. dhab ahaantii waxay Giriiggu ka dhigan tahay midabbo badan. Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira hoosyaal badan oo walaac badan noloshaada, miyaad aqbali doontaa taas? Waxaa jira hadhyo badan oo walaac badan. Dhammaantood isku mid ma wada eka. Waxaa jira walaac dhaqaale, waxaa jira walaac la xiriira, waxaa jira walaac caafimaad, waxaa jira walaac xagga jirka ah, waqti culays ayaa jira. Wuxuu dhahayaa inay dhamaantood midabyo kala duwan yihiin. Laakiin hadaad baxdid oo aad iibsato gaari oo aad rabto midab gaar ah, markaa waa inaad sugtaa. Ka dibna markii la sameeyo, ka dib waxaad helaysaa midabkaagii caadiga ahaa. Taasi dhab ahaantii waa erayga halkan lagu isticmaalay. Waa midab caadi ah, tijaabooyin badan oo noloshaada kujira. Eebbe wuu u oggolaanayaa sabab. Dhibaatooyinkaaga qaar ayaa caadiyan caado ahaan loo sameeyay. Qaar iyaga ka mid ah oo aan dhammaanteen isla soo aragnay, sidan oo kale, COVID-19. Laakiin isagu wuxuu leeyahay dhibaatooyinka waa kuwa doorsooma. Iyo waxa aan ula jeedo taas waa inay ku kala duwan yihiin xoogga. Si kale haddii loo dhigo, sida ay u adag yihiin. Waxay ku kala duwan yihiin inta jeer, waana sidaas muddo. Annagu garan mayno inta ay tani soconayso. Annagu garan mayno sida ay u dhib badnaan karto. Waxaan arkay calaamad maalin kale oo leh, Nolol walba roob ayaa ku dhici doona "laakiin tani waa wax lagu qoslo." (qosol) Aniguna waxay ila tahay taasi waa sidaas dad badan ayaa dareemaya hadda. Tani waa wax lagu qoslo. Dhibaatooyinka waa lama huraan oo wey isbeddelaan. Waxyaabaha seddexaad ee James ayaa sheegaya sidaa darteed waxba kama naxno waa dhibaatooyinka aan la saadaalin karin. Lama saadaalin karo. Wuxuu dhahay markii tijaabooyin badan ay noloshaada galaan, hadaad qoreyso qoraal, wareeji weedhaas. Waxay ku buuxiyeen noloshaada. Eeg, dhibna weligeed ma imaan markaad u baahatid ama markii aadan u baahnayn. Kaliya waxay timaadaa markay rabto inay timaado. Taasi waa qayb ka mid ah sababta ay dhibaato u tahay. Dhibaatooyinka ayaa yimaadda waqtiga ugu habboon. Weligaa ma dareentay inaad dhibaato dareento soo galay noloshaada, adigu tag, hadda maya. Dhab ahaantii, sida hadda? Halkan Kaniisadda Saddleback, waxaan ku jirnay olole weyn oo ku riyoonaya mustaqbalka. Hadana si lama filaan ah ayaa coronavirus ku dhacay. Oo waan tegayaa, hadda ma aha. (chuckles) Hadda ma ahan. Weligaa miyaad qabatay taayir fidsan markii aad soo daahay? Ma helaysid taayir fidsan markaad heshay waqti badan. Waxaad ku deg degtay inaad meel aado. Waxay lamid tahay sida ilmuhu u lebbisto dharkaaga cusub sida aad ugu baxeyso howlgal fiid ah. Ama kala jeexjeexa surwaalkaaga intaadan hadlin. Taasoo runtii igu dhacday hal mar Axad waqti dheer kahor. Dadka qaar, waa dad dulqaad badan, iyagu ma sugi karaan albaabka rogida. Waa inay wax bartaan, waa inay sameeyaan, hadda waa ay sameeyaan, hadda waa sameeyaan. Waxaan xasuustaa sanado badan kahor inaan Jabaan ahaa, oo waxaan taaganahay tareenka dhulka hoostiisa ku suga ee dhulka hoostiisa mara inuu yimaado, iyo markuu furay, albaabadu way furmeen, iyo nin dhalinyaro ah oo reer Japan ah isla markiiba mashxarad ayaa igu soo dhacday markii aan halkaas taaganahay. Oo waxaan is idhi, waa maxay aniga, sababta hadda? Waa wax aan la saadaalin karin, waxay yimaaddaan marka aadan u baahnayn em. Si dhif ah ayaad u sii saadaalin kartaa dhibaatooyinka noloshaada. Haddaba ogsoonow, waxay leedahay goorta nooc kasta oo tijaabooyin ah, goorta, waa lama huraan, dhammaan noocyada, way isbeddelaan, dad badan ayaa noloshaada gala, taasi waa wax aan la saadaalin karin, wuxuu leeyahay ha u diidin kuwa carqaladeeya. Muxuu halkan ka sheegayaa? Hagaag, aniga ayaan si faahfaahsan u sharixi doonaa. Laakiin halkan waa waxa afaraad ee Baybalku ka leeyahay dhibaatooyinka. Dhibaatooyinku waa ujeedo. Dhibaatooyinku waa ujeedo. Eebbe wax walba isagaa u leh ujeed. Xitaa waxyaabaha xun ee ku dhaca nolosheena, Eebbe wanaagga wuu ka soo bixin karaa. Ilaahay qasab kuma aha inuu dhibaato kasta keeno. Dhibaatooyinka badankood ee aan nafteenna u geysto. Dadku waxay dhahaan, maxay dadku u xanuunsadaan? Hagaag, hal sabab ayaa ah inaanan sameynin waxa Eebbe ina faray inaan sameyno. Haddaynu cunnay wuxuu Ilaahay ina faray inaan wax cunno, haddii aan u seexan lahayn sida Eebbe noogu yidhi nasasho, haddii aan jimicsano sida uu Eebbe noogu sheegay jimicsi, haddii aanaan u oggolaan shucuur-xumada nolosheena sida Ilaah wuxuu sheegayaa, haddii aan addeecinno Ilaah, dhibaatooyinkayaga badankood kuma qabno. Daraasadaha ayaa muujiyey in ku dhawaad ​​80% dhibaatooyinka caafimaad wadankan, America dhexdeeda, waxaa sababa waxa la yiraahdo xulashooyinka qaab nololeed ee daba dheeraada. Si kale haddii loo dhigo, kaliya wax sax ah kama qabanno. Ma yeelno waxa caafimaadka qaba. Badanaa waxaan sameynaa sheyga is-burburin. Laakiin waxa uu sheegayo waa halkaan, dhibaatooyinka waa ujeedo. Wuxuu dhahay markii aad la kulanto dhibaatooyin, garowsadeen inay wax soo saaraan. Goobaabi weedhaas, waxay u yimaadaan inay wax soo saaraan. Dhibaatooyinka ayaa wax soo saar leh. Hadda, iyagu si otomaatig ah waxsoosaar uma sameeyaan. Fayraskan COVID, hadaanan ka jawaabin maalinta saxda ah, noloshayda kuma soo saari doono wax weyn. Laakiin haddaan sida saxda ah uga jawaab celiyo, xitaa waxyaabaha ugu xun nolosha noloshayda soo saari kara koritaan iyo faa'iidooyin iyo duco, noloshaada iyo noloshayda. Waxay u yimaadaan inay wax soo saaraan. Wuxuu halkaan ka sheegayaa silica iyo walaaca iyo murugo, haa, iyo xitaa jirro waxbaa kasii bixi kara ee qiimaha leh haddii aan u oggolaanno. Dhammaanteed waxay ku jirtaa xulashadayada, waxay ku jirtaa qaabkeenna. Ilaah wuxuu adeegsadaa dhibaatooyinka nolosheena. Waxaad dhahdaa, hagaag, sidee buu taasi u sameeyaa? Sidee buu Ilaah ugu adeegsadaa dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka nolosheena? Hagaag, waad ku mahadsan tahay weydiinta, maxaa yeelay marinka xiga ama qaybta xigta ee aayadaha ayaa leh in Ilaah u adeegsado saddex qaab. Saddex siyaabood, Ilaah wuxuu adeegsadaa dhibaatooyin noloshaada saddex qaab. Marka hore, dhibaatooyinku waxay tijaabiyaan iimaankayga. Haddaba, iimaankaagu waa sidii muruq. Muruqda lama xoojin karo haddaan la tijaabin, haddii aan la fidin, mooyee mooyee. Ma sameysid muruqyo ad adag adoo aan waxba qabaneyn. Waxaad ku yeelanaysaa murqo xoog leh adoo fidinaya iyo xoojinta iyo tijaabinta oo iyaga ku riixaya ilaa xad. Markaa wuxuu dhahay dhibaatooyinku waxay u yimaaddaan tijaabinta caqiiddayda. Wuxuu leeyahay ogaada inay u yimaadeen inay tijaabiyaan iimaankaaga. Hadda, tijaabada ereyga isla markiiba, taasi waa eray Waqtiga Kitaabka Quduuska ah ee loo isticmaali jiray in lagu safeeyo biraha. Wixii aad sameyn lahaydna waxaad qaadan lahayd bir qaali ah sida lacag ama dahab ama wax kale, oo waxaad ku dhex ridi lahayd dheri weyn oo waadna kululayn doontaa heer kul aad u sareeya, sabab? Heerkulka sare, dhammaan nijaastoodii waa la gubay. Waxa kaliya ee harayna waa dahabka saafiga ah ama lacagtii saafiga ahayd. Taasi waa erayga Griiga halkan loogu talagalay tijaabinta. Waa dabka nadiifiya marka Eebbe shido kuleylka oo u oggolaanaya taas nolosheena, Waxay gubtaa alaab aan muhiim ahayn. Waad ogtahay waxa dhici doona toddobaadyada soo socda? Walxaha aan dhammaanteen u malaynnay inay runtii muhiim ahaayeen, waan garwaaqsan nahay, hmm, waan is waafaqay kaliya fiicnayn taas la'aan. Waa dib-u-habayn ku samaynteynna ahmiyadaheenna, maxaa yeelay arrimuhu way isbedelayaan. Hadda, tusaalaha caadiga ah ee sida dhibaatooyinka u tijaabiyaan caqiidadaada waa sheekooyinka ku saabsan Job ee Kitaabka Quduuska ah. Waxaa jira buug dhan oo ku saabsan Job. Waad ogtahay, Ayuub inuu ahaa ninka ugu taajirsan Kitaabka Quduuska ah, maalin keliyana wuu lumay. Wuxuu lumiyey qoyskiisii ​​oo dhan, wuxuu lumiyey maalkiisii ​​oo dhan, dhamaan asxaabtiisi ayuu laayay, argagixisadu waxay weerartay qoyskiisa, Wuxuu helay cudur cabsi badan, oo xanuun daran oo daran taas oo aan la daaweyn karin. Hagaag, isagu waa terminal. Oo haddana, Ilaah baa imtixaamay rumaysadkiisa. Hadana Eebbe dib ayuu u soo celiyaa isaga dhab ahaan labanlaab wixii uu haystay ka hor inta uusan soo marin imtixaanka weyn. Hal mar ayaan aqriyay xigasho meel waqti dheer kahor taas oo uu yiri dadku waa sida bacaha shaaha. Xaqiiqdii garan maysid waxa 'em ilaa aad ku tuurid em biyo kulul. Ka dib markaa waad arki kartaa waxa dhab ahaan ku jira gudaha. Weligaa miyaad waligaa ka mid noqotay maalmahaas biyaha kulul? Weligaa weligaa mid ka mid ah toddobaadyadan ama bilahaas biyo kulul ma ku jirtay? Waxaan ku jirnaa xaalad biyaha kulul hadda. Wixii kugu soo dhacaana waa waxa gudahaaga ku jira. Waa sida cadayga ilkaha. Haddii aan haysto tuubo daawada cadayga oo aan riixo, maxaa ka soo bixi doona? Waxaad tiri, hagaag, cadayga ilkaha. Maya, qasab ma ahan. Waxay dhihi kartaa daawada cadayga ee banaanka, laakiin waxay lahaan kartaa maraqa marinara ama subagga lowska ama majones gudaha. Maxaa ka soo baxa marka cadaadiska la saaro waa wax kasta oo ku jira. Iyo maalmaha soo socda sida aad ula macaamilayso viruska COVID, waxa kaa soo bixi doona waa waxa adiga kugu jira. Oo haddii aad ka buuxdo qadhaadh, taasi way soo bixi doontaa. Oo haddii aad ka buuxdo jahwareer, taasi way soo bixi doontaa. Iyo hadaad ka buuxdo xanaaq ama walwal ama eed ama ceeb ama amni xumo, taasi waa qeyb ka soo baxda. Haddii aad ka baqdo taasi waa, waxkastoo gudahaaga ah Waa maxay waxa ka soo baxa marka cadaadiska lagaa saaro. Waana taas waxa uu ka leeyahay halkan, Dhibaatooyinkaasna waxay tijaabiyaan iimaankayga. Waad ogtahay, sanado ka hor, waxaan la kulmay nin oday ah runtii Shir sanado badan ka hor lagu soo noqday Bariga. Waxaan u maleynayaa inuu ahaa Tennessee. Oo isagu, odaygan ayaa ii sheegay sida loo dego ahaa faa iidada ugu weyn noloshiisa. Aniguna waxaan idhi, Waa hagaag, waxaan rabaa inaan maqlo sheekadan. Waxyaabahaas oo dhan ii sheeg. Oo waxay ahayd wuxuu ahaa wuu shaqeeyay alwaax noloshiisa oo dhan. Wuxuu ahaan lahaa miis-dheere noloshiisa oo dhan. Laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaa hoos u dhac dhaqaale uu ku yimid. maamulkiisii ​​ayaa gudaha u galay oo si lama filaan ah ugu dhawaaqay, "Waa lagaa eryay." Aqoontiisa oo dhammuna waxay u baxeen albaabka. Oo waxaa lagu furay isagoo 40 sano jir ah naag iyo qoys iyo ma jiraan fursado kale oo shaqo oo ku xeeran, wakhtigaasna hoos u dhac ayaa ku yimid. Oo isna wuu qalbi jabay, oo isna wuu cabsaday. Qaar idinka mid ah ayaa dareemi kara sidaas oo kale hadda. Waa laga yaabaa in mar hore lagaa saaray. Laga yaabee inaad ka baqeyso inaad noqon doonto la seexday intii lagu jiray qalalaasahan. Oo isna wuxuu ahaa quruxsan niyad jab, wuxuu ahaa cabsi cabsi. Wuxuu yiri, waxaan qorey kan, wuxuu yiri, waxaan dareemay sida Adduunkeygu wuu xanaaqay maalintii la i eryay. "Laakiin markii aan guriga tegey, waxaan u sheegay afadayda wixii dhacay, "oo waxay weydiisay," Maxaad hadda samaynaysaa? ' "Oo waxaan idhi, ka dib markaa tan iyo markii lay eryay, Waxaan sameyn karaa wixii aan markasta doonayay inaan sameeyo. Noqo qof wax dhisa. Waxaan amaahdaynayaa gurigeenna "waxaana ku galayaa ganacsiga dhismaha." Oo isna wuxuu igu yidhi, Waad garanaysaa, Rick, meeshiisii ​​iigu horraysay "wuxuu ahaa dhismaha laba moteel oo yaryar." Taasi waa waxa uu sameeyay. Laakiin wuxuu yidhi, "Shan sano gudahood, waxaan ahaa milyaneer aad u tiro badan." Ninkaasi waa magaca aan la hadlay, wuxuu ahaa Wallace Johnson, iyo ganacsigii uu bilaabay ka dib markii shaqada laga eryay waxaa la odhan jiray Holiday Inns. Meelaha Fasaxyada. Wallace ayaa igu yidhi, "Rick, maanta, haddii aan heli karo "Ninka i eryay, si daacad ah ayaan uhadali lahaa "ku mahadsan wixii uu sameeyay." Waqtigaas markay dhacday, maan fahmin maxaa laygu eryay, maxaa layga saaray. Laakiin markii dambe ayaan arki karayay in ay tahay mid Ilaahay ka yimid iyo qorsho yaab leh oo igu kalifay shaqadii uu doortay. Dhibaatooyinku waa ujeedo. Ujeeddo ayey leeyihiin. Ogaadaan inay u imanayaan wax soo saarka, iyo waxyaalaha ugu horreeya waxay soo saaraan waa iimaan weyn, waxay tijaabinayaan iimaankaaga. Lambarka labaad, waa kan faaiidada labaad ee dhibaatooyinka. Dhibaatooyinku waxay horumariyaan dulqaadashadeyda. Waxay horumariyaan dulqaadkayga. Taasi waa qaybta dambe ee weedha, waxay leedahay Dhibaatooyinkaasi waxay u yimaadaan inay yeeshaan dulqaad. Waxay ku bartaan adkeysi noloshaada. Waa maxay natiijada dhibaatooyinka noloshaada? Awoodda joogitaanka. Waa macno ahaan awood u leh xallinta cadaadiska. Maanta waxaan ugu yeernaa adkeysi. Awoodda dib loogu laabashada. Iyo mid ka mid ah tayada ugu wanaagsan ee cunug kastaa u baahan yahay inuu barto qofkastoo qaangaar ahna wuxuu ubaahanyahay inuu barto waa adkeysiga. Maxaa yeelay qof kastaa wuu dhacaa, qof walbana wuu turunturoodaa, qof walba wuxuu soo maray waqtiyo adag, qof walbaa waqti ayuu u xanuunsadaa. Qof kastaa wuxuu ku leeyahay guuldarooyinka noloshooda. Waa sideed u maareeysaa cadaadiska. Adkaysi, waad sii wadaysaa kuna sii dheereysaa. Hagaag, sideed ku bartaa inaad taas sameyso? Sideed ku baranaysaa sida loo maareeyo cadaadiska? Khibrad ahaan, taasi waa wadada kaliya. Ma baran doontid inaad wax ka qabato cadaadiska buugga qoraalka. Ma baran kartid sida loo maareeyo cadaadiska seminar. Waxaad baranaysaa sida loo maareeyo cadaadiska adoo cadaadis lagaa saaray. Mana ogaan kartid waxa kugu jira ilaa inta si dhab ah lagugu geliyay xaaladaas. Sannadkii labaad ee Kaniisadda Saddleback, 1981, Waxaan soo maray xilli niyad jab leh halkaas oo toddobaad kasto aan doonayo inaan casilo. Aniguna waxaan rabay inaan joojiyo galab kasta oo axad ah. Hadana waxaan ku jiray waqti adag noloshayda, oo weliba waxaan gelin lahaa hal cag oo horteeda hortiisa sidii Ilaah, ha ii helin inaan dhiso kaniisad weyn, laakiin ilaahow, toddobaadkan i sii. Anigana waan ka quusan lahaa. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aanan quusan. Laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay in Ilaah uusan iga quusan. Maxaa yeelay taasi waxay ahayd tijaabo. Oo intii lagu jiray sannadkaas tijaabada ah, waxaan ku soo baxay xoogaa ruuxiyan ah iyo qaraabo iyo dareen iyo awood maskaxeed taasi waxay ii oggolaatey sannado kadib inaan kubbado dhammaan noocyada kubadaha oo ay wax ka qabtaan culeys aad u badan indhaha dadweynaha maxaa yeelay sanadkaas ayaan soo maray of guri out out adag, midba midka kale ka kale. Waad ogtahay, Mareykanku wuxuu la yeeshay xiriir jacayl ah oo ku habboon. Waxaan jecel nahay fududeynta. Maalmaha iyo toddobaadyada ka dambeeya dhibaatadan, waxaa jira waxyaabo badan oo aan isku habboonayn. Aan ku habboonayn. Maxaynu nafteenna ku samayn karnaa? marka wax kastaa aan raaxo lahayn, marka ay tahay inaad kaliya sii wadato markii aadan dareemayn inaad sii wadato. Waad ogtahay, himilada triathlon ama yoolka marathon-ka runtii maahan xawaaraha, sida ugu dhaqsaha badan ee aad halkaa ku tageysid waa wax badan oo ku saabsan adkaysiga. Miyaad dhammeysaa tartanka? Sidee ayaad ugu diyaarsataa waxyaabaha noocaas ah? Kaliya iyada oo loo maro. Markaa markii lagu kala bixin doono maalmaha soo socda, ha ka welwelin, ha ka welwelin. Dhibaatooyinku waxay horumariyaan dulqaadashadeyda. Dhibaatooyinku waxay leeyihiin ujeedo, waa ujeedo. Waxa saddexaad oo uu James nooga sheegay dhibaatooyinka waxaan soo maraynaa waa in dhibaatooyinku ku waayaan dabeecaddayda. Oo wuxuu ku leeyahay this aayadda afaraad ee James cutubka koowaad. Wuxuu dhahay laakiin, habraaca sii wado ilaa aad noqotid dad dabeecad bisil leh iyo daacadnimo oo aan lahayn dhibco daciif ah. Ma jeclaan lahayd inaad taas lahaato? Ma jeclaan lahayd inaad maqashid dadka dhahaya, waad ogtahay, Naagtaasi ma leedahay dhibco tabar yar oo ku saabsan dabeecaddeeda. Ninkaasi, ninkaas ma leh dhibco daciif ah dabeecaddiisa. Sideed ku heli kartaa dabeecadda noocaas ah ee bisil? Ha sii wado howsha ilaa aad dad ka noqotid, Ragga iyo dumarka, dabeecad wanaagsan iyo daacadnimo oo aan lahayn dhibco daciif ah. Waad ogtahay, waxaa jiray daraasad caan ah oo la sameeyay dad badan, sanado badan kahor Ruushka inaan xasuusto qorista, waxayna ku reebtay saamaynta sida xaaladaha nololeed ee kaladuwan saameeyay cimri dheeri ama cimrigii xayawaanada kala duwan. Sidaasi darteedna waxay dhigeen xayawaan xoolo nool. waxayna xoolo kale dhigteen si ka sii adag iyo deegaanno adag. Saynisyahannadana waxay ogaadeen in xayawaanku in la dhigay meel raaxo leh iyo bay'adaha fudud, xaaladaha, xaaladaha nololeed eeas, runti waxay noqdeen daciif. Sababtoo ah shuruudaha aad bay u fududaayeen, way daciif noqdeen iyo u nugul cudurka. Kuwii ku jiray xaaladaha xasilloonaa si dhakhso leh ayay u dhinteen ka badan kuwa loo oggol yahay inay la kulmaan dhibaatooyinka caadiga ah ee nolosha. Taasi ma xiiso ayey leedahay? Waxa xayawaanku ka run sheegaan waan hubaa inay run yihiin of our dabeecad, sidoo kale. Dhaqanka reer galbeedka gaar ahaan adduunka casriga ah, siyaabo badan ayaan u soo marnay. Nolosha nolol ku habboon. Eebbe yoolka koowaad ee noloshaada waa inuu kaa dhigo sidii Ciise Masiix oo dabeecad ahaan ku dhisan. Si loogu fikiro sida Masiixa, oo aan u dhaqmo sida Masiixa, inaad ugu noolaatid sida Masiix, oo aad u jeclaatid sida Masiixa, inuu noqdo qof wanaagsan sida Masiixa. Hadday taasi run tahay, oo Baybalku sidan leeyahay marar badan, ka dib ayaa Ilaahay kaa qaadi doona isla waxyaabahaas in Ciise dhex maray inuu kobciyo dabeecaddaada. Waxaad tiraahdaa, waa hagaag, muxuu Ciise yahay? Ciise waa jacayl iyo farxad iyo nabad iyo samir iyo naxariis, Midhaha Ruuxa, waxyaalahaas oo dhan. Oo sidee buu Ilaahay u soo saaraa kuwaas? Adoo gelinaya xaalada ka soo horjeedda. Waxaan barannaa samir marka aan isku dayno inaan dulqaadno. Waxaan baranaa jaceylka marka aan xirno dad bilaa naxariis ah. Waxaan baranaa farxadda bartamaha murugada. Waxaan baranaa sida loo sugo oo loo yeesho samirka noocaas ah marka waa inaan sugnaa. Waxaan baranaa naxariis marka la jirrabo oo aan noqono dadnimo. Maalmaha soo socda, waxay noqoneysaa mid aad u xoog badan inaad ugaarsato oo kaliya goob wax lagu dubto, dib u soo gal, oo waxaan idhi, Waan daryeelaynaa. Aniga, nafteyda, iyo aniga, qoyskeyga, anaga afar iyo wax ka badan ma jiraan oo iska ilow qofkasta oo kale. Laakiin taasi naftaada ayaa burburin doonta. Haddii aad bilaabi doonto inaad ka fikirto dadka kale iyo caawinta kuwa nugul, waayeelka iyo kuwa qaba xaalado hore u sii kala sooc lahayn, oo hadaad gaadho naftaada ayaa na kori doonta, Qalbigaagu kori doono, waxaad noqon doontaa qof ka fiican Dhamaadka xiisaddan sidii ay ahayd bilowgii, ok? Ilaahow, waad aragtay markii uu doonayo inuu dhiso dabeecaddaada, wuxuu isticmaali karaa laba shay. Wuxuu adeegsan karaa Eraygiisa, runta ayaa na beddeleysa, wuuna isticmaali karaa duruufaha, kuwaas oo aad uga adag. Haddaba, Ilaah ayaa doorbidi lahaa inuu isticmaalo jidka ugu horreeya, Erayga. Laakiin had iyo goor ma dhagaysanno Ereyga, sidaa darteed wuxuu u adeegsadaa duruufaha si aan u helno dareenkeena. Waana ka adag tahay, laakiin inta badan waa ka waxtar badan. Hadda, waxaad tiraahdaa, waa hagaag, ok, Rick, Waan helay, in dhibaatooyinku ay yihiin kuwo isbeddela oo ay u jeeddo leeyihiin, oo waxay halkan u joogaan inay tijaabiyaan caqiidadayda, waana ay noqon doonaan dhammaan noocyada kaladuwan, mana yimaadaan markay rabo 'em. Ilaahayna wuu u adeegsan karaa 'em' si uu u kobciyo dabeecaddayda oo uu noloshayda u kobco Marka maxay tahay inaan sameeyo? Maalmaha soo socda iyo toddobaadyada iyo laga yaabee bilaha soo socda sida aan u wajahayno dhibaatada Coronavirus si wada jir ah, Sideen ugu jawaabaa dhibaatooyinka noloshayda? Aniguna kama hadlayo kaliya viruska. Waxaan ka hadlayaa dhibaatooyinka imaan doona natiijo ahaan inaad ka maqnaato shaqada ama caruurtu guriga joogaan ama dhammaan waxyaabaha kale ee nolosha murugooda sidii caadiga ahayd. Sideen ugu jawaabaa dhibaatooyinka noloshayda? Hagaag, mar labaad, James waa mid aad u gaar ah, oo isagu wuxuu na siiyaa saddex aad wax ku ool ah, waa jawaabo xag-jir ah, laakiin waa jawaabaha saxda ah. Xaqiiqdii, markaan kuu sheego midka koowaad, waad tagi doontaa, waad iigayaysaa. Laakiin waxaa jira saddex jawaabood, dhammaantood waxay ku bilaabmayaan R. Jawaabta ugu horeysa ee uu dhaho waa goortaad tahay Wakhti adag gudbi, farxa. Waad tagtaa, miyaad qosolaysaa? Taasi waxay u muuqataa masochistic. Ma dhahayo ku farax dhibaatada. Ii raac daqiiqadadan. Wuxuu yiri tixgeli farxaan saafi ah. Dhibaatooyinkan ula dhaqan asxaab ahaan. Haddaba, ha i fahmin. Isagu been ma sheegayo ee waa been abuur. Isagu ma dhahayo dhoola cadeyn balaastiig ah, iska dhig wax kasta inay hagaagsan yihiin oo aysan ahayn, maxaa yeelay maahan. Pollyanna, Orphan Annie, qoraxda soo bixi doona berri, ma laga yaabaa inuu soo baxo berri. Isagu maahan inuu dafiro xaqiiqada, haba yaraatee. Isagu odhan maayo inuu yahay gacaliye. Wiil yahow, xanuun baan qabaa. Eebbe wuu neceb yahay xanuunka inta aad jeceshahay. Oh, Waxaan u xanuunsanayaa, sixi Oo waxaad leedahay dhismaha shahiidnimo, oo waad ogtahay, Kaliya waxaan hayaa dareenkan ruuxiga ah markaan dareemayo xumaan. Maya, maya, maya, Ilaah ma doonayo in aad shahiid noqoto. Eebbe ma doonayo inaad lahaato dabeecadda masochistic ee xanuunka. Waad ogtahay, Waxaan xasuustaa hal jeer oo aan soo maray waqti adag runti iyo saaxiib wuxuu isku dayey inuu naxariis yeesho oo waxay ku yidhaahdeen, Waad og tahay, Roobow, kalsoonow "maxaa yeelay arrimuhu way ka sii xumaan karaan." Oo bal qiyaas waxa, ay sii xumaadeen. Taasi wax gargaar ah gabi ahaanba ma jirin. Waan faraxsanahay wayna sii xumaadeen. (cufan) Marka maahan fikir been abuur ah oo Pollyanna laga fikirayo. Haddii aan u dhaqmo si xamaasad leh, waan ku farxi doonaa. Maya, maya, maya, maya, way badantahay, aad ayey uga qoto dheer tahay intaas. Kuma faraxsani, ma dhagaysanno, kuma faraxsani dhibaatada. Waxaan ku faraxsanahay dhibaatada, inta aan dhibaatada ku jirno, weli waxaa jira waxyaabo badan oo lagu farxo. Dhibaatada lafteeda maahan, laakiin waxyaabaha kale in aan ku farxi karno dhibaatooyinka. Maxaynu ugu farxi karnaa xitaa dhibaatada? Sababta waxaan ognahay inay ujeedo leedahay. Sababtoo ah waxaan ognahay in Ilaah uusan inaga tagi doonin. Sababtoo ah waxaan ognahay waxyaabo badan oo kala duwan. Waxaan ognahay in Ilaah leeyahay ujeedo. Fiiro u yeelo wuxuu leeyahay tixgeli farxaan saafi ah. Goobo geli erayga tixgelinta. Tixgeli macnaha inaad si kas ah u sameyso maskaxdaada. Waxaad heshay is-hagaajin dabeecadeed in aad tahay inaad halkaan sameyso. Ma tahay doorashadaada inaad ku faraxdo? Sabuurradii 34 aayadda koowaad, wuxuu leeyahay Wakhti kasta ayaan Rabbiga ammaani doonaa, Waqtiyada oo dhan. Isna wuxuu yidhi, Waan doonayaa. Waa doorashada doonista, waa go'aan. Waa ballanqaad, waa doorasho. Hadda, waad iska dhex bixi doontaa bilaha soo socda oo leh dhaqan wanaagsan ama dhaqan xumo. Haddii fikirkaagu xun yahay, waad isqarxin doontaa naftaada iyo dadka kale ee kugu xeeran murugaysan. Laakiin haddii fikirkaagu fiican yahay, doorashadaada ayaa ah inaad ku faraxdo. Waxaad leedahay, aan eegno dhinaca ifaya. Aynu helno waxyaalaha aan uga mahadcelin karno Ilaah. Oo aan xaqiiqsanaa in xitaa kuwa xun, Eebbe wanaagga ka soo bixiyo. Marka samee isku hagaajinta dabeecadda. Kama murugoodo dhibaatadan. Waxaan ku fiicnaan doonaa xiisadan. Waan dooranayaa, waa doorashadayda inaan ku farxo. Hagaag, lambarka labaad, kan labaad R waa codsi. Taasina waa weydiisashada xigmadda Eebbe. Tan ayaa ah waxa aad rabto inaad sameyso markasta oo aad dhibaato ku jirto. Waxaad rabtaa inaad weydiisato xigmad. Toddobaadkii hore, haddii aad dhegeysatay farriinta usbuucii la soo dhaafay, haddii aad seegtayna dib ugu noqo khadka tooska ah ee taleefanka ka daawo oo eeg iyadoo laga sii marayo dooxada fayras cabsi la'aan. Waa doorashadaada inaad ku faraxdo, laakiin markaa waxaad weydiisataa xigmad. Oo waxaad weydiisataa xigmad oo waad tukataa adigana waad ka duceysaa dhibaatooyinkaaga. Aayadda toddobaad ayaa tan ku leh Yacquub mid. Haddii howshan gudaheeda midkiin uusan aqoon sida loo kulmo dhibaato kasta oo gaar ah, tani waxay ka baxsan tahay tarjumaadda Phillips. Haddii howsha gudaheeda midkiin uusan aqoon sida loo kulmo dhibaato kasta oo gaar ah waa inaad Ilaahay weydiisataa oo keliya oo deeqsi ah siiya dadka oo dhan adigoon ka dhigin inay dareemaan dambi. Waxaana laga yaabaa inaad hubto in xikmadda lagama maarmaanka ah waa lagu siin doonaa. Waxay igu dhahaan sababta aan wax kasta u weydiisan lahaa xigmad dhexda dhibaato? Marka waxaad ka baranaysaa. Markaa waad ka baran kartaa dhibaatada, Taasi waa sababta aad u weydiisato xigmad. Way ku caawin badan tahay haddii aad joojiso weydiinta sababta, maxay tani u dhacaysaa, oo u bilow inaad isweydiiso, maxaad rabtaa inaan barto? Maxaad rabtaa inaan noqdo? Sideen uga kori karaa tan? Sideen ugu noqon karaa naag wanaagsan? Sideen ugu noqon karaa nin ka sii fiican dhibaatadan? Haa, waa la i baarayaa. Kama walwalayo sababta. Maxay runtii xitaa muhiim u tahay Waxa muhiimka ahi waa maxay, maxaan noqdaa oo maxaan ka baran karaa xaaladdan? Si taas loo sameeyona, waxaad heli doontaa xigmad. Markaa wuxuu dhahay markasta oo aad u baahatid xigmad, Ilaah weydiiso, Ilaahay xoogaa ha ku siiyo. Markaa waxaad leedahay, Ilaahow, waxaan ubaahanahay xigmad sidii hooyaday oo kale. Caruurtaydu waxay joogi doonaan guriga bisha soo socota. Waxaan ubaahanahay xigmad sida aabe. Sideen u hogaamiyaa markaan shaqooyinkeenna khatar ku jiraan oo hadda ma shaqeyn karo? Weydiiso xigmad Ha weydiinin sababta, laakiin weydii waxa. Marka marka hore waad farxeysaa, waxaad heleysaa aragti wanaagsan odhaahda waan ku mahadnaqayaa Ilaahay dhibta, laakiin waan ku mahadnaqayaa Ilaahay dhibaatada. Sababtoo ah wanaagga Ilaah xitaa markuu nolosha nuugo. Taasi waa sababta aan ugu yeerayo taxanahan "Iimaan dhab ah oo shaqeeya marka noloshu aysan shaqeynin." Markay noloshu shaqeyn weydo. Markaa waan ku farxaa oo waan weyddiistaa. Waxa seddexaad ee James yiraahdo inuu sameeyo waa nasasho. Haa, sida kiinad u degganaan, ha helin naftaada kulligood waxay ku taal tuulmo dareemeyaal ah. Ha ku kicin culeys badan oo aadan waxba sameyn karin. Ha ka welwelin mustaqbalka. Ilaah wuxuu yidhi waan ku xanaanayn doonaaye, i aamin Waxaad ku kalsoonahay inaad ogaatay waxa ugu fiican. Waxaad isaga kaashanaysaa isaga. Ha ka gaabin xaaladda aad ku dhex marayso. Laakiin waxaad dhahdaa, Ilaahow waan nasan doonaa. Shaki kuma qabo. Shaki kuma qabo. Waxaan kugu kalsoonahay xaaladaan. Aayadda sideed waa aayadda ugu dambaysa ee aan eegno. Hagaag, waxaan eegi doonaa hal in ka badan daqiiqad gudaheed. Laakiin aayadda siddeedaad waxay leedahay, laakiin waa inaad iimaanka ku weydisaa shaki la’aan qarsoon. Maxaad iweydiisanaysaa adigoo aamin ah? Weydiiso xigmad. Oo waxaad tidhaahdaa, Ilaahow, waxaan u baahanahay xigmad, oo waan ku mahad naqayaa adigu waad i siinaysaa xigmadda. Waan ku mahadsan yahay, waxaad i siisay xigmad. Ha xoqin, hana shakiyin, laakiinse u bixi xagga Ilaah. Waad ogtahay, Baybalku wuxuu leeyahay, horaan markii aan tilmaanay in ay tiri dhibaatooyinka noocaan oo kale ah. Waad ogtahay, waxaan ka wada hadalnaa inay iskula mid yihiin, dhibaatooyin badan oo kala duwan. Ereygaas oo Giriig ah, noocyo badan oo dhibaato ah, waa isla ereyga lagu daboolay First Butros cutubka afaraad, aayadda afaraad oo yiri Ilaah nimcooyin badan baa ku siiya. Noocyada badan ee Eebbe. Waa isla midabbo kala duwan, isku dhafan, sida dheeman. Muxuu ku odhanayaa halkaa? Dhibaato kasta oo aad haysato, waxaa jirta nimco xagga Eebbe laga helo. Nooc kasta oo badan oo ah tijaabo iyo dhib iyo dhib, waxaa jira nooc nimco iyo naxariis leh iyo awooda uu Eebbe doonayo inuu ku siiyo si loo waafajiyo dhibaatadaas gaarka ah. Waxaad ubaahantahay nimco taas, waxaad ubaahantahay nimco taas, waxaad ubaahantahay nimco Ilaah wuxuu yiri nimcadaydu waa sida multifeatured sida dhibaatooyinka aad wajahayso. Marka maxaan idhaahdaa? Waxaan dhahayaa dhamaan dhibaatooyinka noloshaada, oo ay ku jiraan xiisaddan COVID, Ibliis macnaheedu waa inuu kugula adkaado dhibaatooyinkaas. Laakiin Ilaah macnaheedu waa inuu kugu horumariyo dhibaatooyinkaan. Wuxuu doonayaa inuu kugu adkaado, Shayddaan, laakiin Ilaah wuxuu doonayaa inuu ku horumariyo. Haddaba, dhibaatooyinka soo gala noloshaada si toos ah ha uga dhigin qof wanaagsan. Dad aad u badan ayaa noqday dad qadhaadh 'em. Si otomaatig ah kaama dhigayso qof fiican. Waa dabeecaddaada isbedel sameysa. Waana meesha aan rabo inaan ku siiyo wax kale oo aad ku xasuusato. Lambarka afraad, shayga afaraad ee la xasuusto marka aad ku dhexjirtid dhibaatooyin waa inaad xasuusataa ballamaha Eebbe. Xusuusnow ballamihii Ilaah. Taasi waxay ku dhacday aayadda 12aad. Bal aan kuu akhriyo ballankan. Yacquub cutubka koowaad, aayadda 12aad. Waxaa barakaysan ninkii dulqaadashada garta, maxaa yeelay markii uu imtixaanka istaagay, wuxuu heli doonaa taajka nolosha ee Ilaah ballanqaaday, waxaa jira ereyga, kuwa isaga jecel. Aan markale akhriyo. Waxaan rabaa inaad dhegeysiga si dhow u dhagaysato. Waxaa barakaysan ninkii dulqaadashada garta, Ayaa wax ka qabta dhibaatooyinka, sida xaalada aan hada ku suganahay. Waxaa barakaysan ninkii adkaysta, oo adkaysta, Oo isagu waa kii rumaysta Ilaah, oo rumeeya kan jirrabaadda. maxaa yeelay markii uu istaagay imtixaanka, soo baxa dhinaca dambe, tijaabadan ma ahan mid soconaya. Dhamaad baa jirta. Waxaad ka soo bixi doontaa dhamaadka dariiqa kale. Waxaad heli doontaa taajka nolosha. Hagaag, xitaa ma aqaano waxa taasi micnaheedu yahay, laakiin waa wax fiican. Oo taajka nolosha ee Ilaah ballan qaaday kuwa isaga jecel. Waa doorashadaada inaad ku faraxdo. Waa doorashadaada inaad ku aaminto xigmadda Eebbe halkii laga shakin lahaa. Weydiiso xigmad inuu kaa caawiyo xaaladaada. Hadana Ilaahay ka barya inuu iimaanka adkaysto. Oo waxaad tidhaahdaa, Ilaahow, quusan maayo. Taasuna way dhammaan doontaa. Qof baa mar la weydiiyay, waa maxay waxa aad ugu jeceshahay aayadda Kitaabka Quduuska ah? Ayuu yidhi, way noqotay. Oo maxaad u jeceshahay aayaddaas? Sababta oo ah markay dhibaatooyinku yimaadaan, waxaan ogahay inaysan u imaan inay joogaan. Wayna kala noqdeen. (cufan) Taasina waa run xaaladdan gaarka ah. Maahan in la joogo, waa la soo afjarayaa. Hadda, waxaan rabaa in aan ku dhawaado fikirkaan. Dhibaatadu kaliya maahan inay dhibaatooyin abuurto. Had iyo jeer way kashifaa, badiyaa way isa soo shaacbixisaa. Dhibaatadan waxay shaaca ka qaadi kartaa dildilaacyada qaar ee guurkaaga. Dhibaatadan waxay muujin kartaa dildilaaca qaar xiriirka aad la leedahay Ilaah. Dhibaatadan waxay daaha ka qaadi kartaa qaar ka mid ah dildilaaca hab-nololeedkaaga, in aad tahay qof si adag isu riixaya. Markaa diyaar u noqo inaad u oggolaatid in Ilaah kula hadlo ku saabsan waxa loo baahan yahay in la beddelo noloshaada, waa hagaag? Waxaan rabaa inaad ka fikirto toddobaadkan, oo aan ku siiyo tillaabooyin wax ku ool ah, ok? Talaabooyinka la taaban karo, midka koowaad, waan ku doonayaa inaad qof kale ku dhiirrigeliso inuu dhageysto fariintan. Miyaad sameyn doontaa taasi? Ma ku xiri doontaa xiriirinkan oo u diri saaxiib? Haddii ay taasi kugu dhiirrigelisay, sii gudub, oo dhiirrigeli toddobaadkan. Dhamaan dadka kugu xeeran waxay u baahan yihiin dhiirigalin inta lagu jiro xiisadan. Marka u dir 'em isku xirka. Laba usbuuc ka hor markii aan kaniisad ku leenahay xeryahayaga, harada Lake iyo dhammaan xarumaheena kale ee Saddleback, qiyaastii 30,000 oo qof ayaa ka soo muuqday kaniisadda. Laakiin usbuucii la soo dhaafay markii ay ahayd inaan joojino adeegyada oo kulligeen waxaan ku qasbanahay inaan ku daawano khadka internetka, waxaan is idhi, qof kasta wuxuu u tagaa kooxdaada yar wuxuuna ku martiqaadaa deriskaaga saaxiibbana ku martiqaada kooxdaada yar, waxaan haysannay 181,000 ISPs ee guryaheena ku xiran adeegga. Taasi micnaheedu waa malaayiin nus milyan dad ah daawaday fariinti usbuucii la soo dhaafay. Nus milyan qof iyo in ka badan. Sababta, maxaa yeelay waxaad u sheegtay qof kale inuu daawado. Aniguna waxaan rabaa inaan kugu dhiiri galiyo inaad markhaati ka noqoto wararka wanaagsan Toddobaadkan adduunyo aad ugu baahan war wanaagsan. Dadku waxay u baahan yihiin inay tan maqlaan. Udir dir. Waxaan aaminsanahay inaan ku dhiiri gelin karno hal milyan oo qof toddobaadkan hadaan dhammaanteen farriin ku gudbino, ok? Lambarka labaad, hadaad ku jirtid koox yar, ma awoodno awoodaan inaad la kulanto, ugu yaraan bishaan, taasi waa hubaal. Aniguna sidaas darteed waxaan kugu dhiiri gelin lahaa inaad sameysato kulan dalwad. Waad helikartaa koox internetka ah. Sideed taas u sameysaa? Hagaag, waxaa jira waxyaabo soo baxay sida Zoom. Waxaad dooneysaa inaad taas hubiso, Zoom, waa bilaash. Adiguna halkaas ayaad tagi kartaa oo u sheegi kartaa qof walba inuu helo Zoom taleefankooda ama kombiyuuterkooda, iyo waxaad ku xiriirin kartaa lix ama sideed ama 10 qof, waana inaad kooxdaada ku lahaan kartaa toddobaadkan Zoom. Waadna arki kartaa weji kale, sida Facebook Live, ama waa sida qaar kale, waad ogtahay, waxa ku jira iPhone marka aad fiiriso FaceTime. Hagaag, taas kuma sameyn kartid koox weyn, laakiin waxaad ku sameyn kartaa hal qof. Oo sidaas daraaddeed ku dhiirrigeli midba midka kale in weji wejiga iyada oo loo marayo farsamada. Waxaan hadda haysannaa tikniyolojiyad aan la heli karin. Marka iska hubi Zoom koox yar oo astaan ​​ah. Oo runtii halkan internetka waxaad heli kartaa xoogaa macluumaad ah sidoo kale. Saddex lambar, haddii aadan ku jirin koox yar, Waxaan kaa caawin doonaa inaad gasho koox khadka tooska ah ee toddobaadkan, waan ku caawin doonaa. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa iimayl ahaan, WadajirRick@saddleback.com. PastorRick @ saddleback, hal-erey, SADDLEBACK, saddleback.com, oo waan kugu xiri doonaa koox khadka tooska ah, sax ma tahay? Markaa iska hubi haddii aad tahay qayb ka mid ah Kaniisada Saddleback si aad u aqrisato joornaalkaaga maalinlaha ah ee aan dirayo maalin kasta inta lagu jiro qalalaasahan. Waxaa lagu magacaabaa "Saddleback at Home." Waxay leedahay talooyin, waxay leedahay farriimo dhiirrigelin leh, waxaa helay war aad isticmaali karto. Wax aad u ficil ah. Waxaan jecel nahay inaan kula xiriirayno maalin kasta. Hel "Saddleback guriga." Haddii aanan haysan cinwaanka emaylkaaga, markaa ma helayso. Adigana waad igu soo diri kartaa cinwaanka emaylkaaga si aad uhesho PastorRick@saddleback.com, oo waxaan kugu dari doonaa liiska, oo waxaad heli doontaa xiriir maalinle ah, warsidaha maalinlaha ah ee "Saddleback in Home". Kaliya waxaan doonayaa inaan xiro ka hor intaanan tukanin adoo mar kale dhahaya inta aan ku jeclahay Maalin kasta waan kuu ducaynayay, waanan kusii socon doonaa ducadaada. Arrintan ayaan isla meel marin doonnaa. Tani ma aha dhamaadka sheekada. Ilaah weli carshigiisii ​​buu ku fadhiyaa, oo Ilaah baa adeegsan doona tan si aad u kobciso iimaankaaga, oo aad dadka u soo gaarto iimaan. Oo yaa yaqaan waxa dhici doona. Waxaan ka heli karnaa nooleynta ruuxiga ah waxaas oo dhan maxaa yeelay dadku badanaa waxay u jeestaan ​​xagga Ilaah markay marayaan waqtiyo adag. Aan kuu duceeyo Aabe, waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo qofkasta yaa dhageysanaya hadda. Aan noolaanno farriinta Yacquub cutubka koowaad, lix ama toddobada aayadood ee ugu horreeya. Aan baranno inay dhibaatooyinku yimaadaan, ay wax dhacayaan, waa kuwa isbedbeddelaya, waa kuwo ujeeddo leh, iyo inaad wax kasbanayso u adeegso iyaga wax wanaagsan nolosheenna haddii aan adiga ku aamini doonno. Naga caawi inaanu shakin. Naga caawi inaan ku faraxno, weydiisanno, Sayidow, iyo in lagu xasuusto ballanqaadyadaada. Aniguna waxaan u duceynayaa qof walba inay lahaadaan usbuuc caafimaad qaba. Magaca Ciise, aamiin. Ilaahay ha idin barakeeyo, qofkasta. U gudbi qof kale.
&quot;Caqiido Wax Ka Qabata Dhibaatooyinka&quot; Wadaag Rick Warren
< start="1.34" dur="1.42"> - Salaan, qof walba, waxaan ahay Rick Warren, >
< start="2.76" dur="1.6"> wadaadka kaniisada Saddleback iyo qoraa >
< start="4.36" dur="2.58"> ee "Ujeedada loo Wado Gaadhiga Nolosha" iyo Hadalka >
< start="6.94" dur="2.71"> barnaamijka "Daily Hope". >
< start="9.65" dur="2.53"> Waad ku mahadsantahay soo-noqoshada barnaamijkan. >
< start="12.18" dur="3.59"> Waad ogtahay, toddobaadkan halkan Orange County, California, >
< start="15.77" dur="2.47"> dawladda ayaa ku dhawaaqday inay mamnuucayaan >
< start="18.24" dur="4.19"> kullamada nooc kasta ha ahaadeene, nooc kasta ha ahaadeene >
< start="22.43" dur="1.46"> ilaa dhamaadka bisha. >
< start="23.89" dur="2.81"> Marka ku soo dhowow Kaniisada Saddleback ee guriga. >
< start="26.7" dur="1.41"> Waan ku faraxsanahay inaad halkaan joogto. >
< start="28.11" dur="5"> Oo waxaan ku bari doonaa fiidiyow >
< start="33.31" dur="4.59"> inta u dhaxaysa hadda iyo markasta oo dhibaatadani COVID-19 ay dhammaato. >
< start="37.9" dur="2.12"> Marka ku soo dhowow Kaniisada Saddleback ee guriga. >
< start="40.02" dur="3.34"> Oo waxaan jeclaan lahaa inaan kugu martiqaado inaad i raacdid toddobaad kasta, >
< start="43.36" dur="2.25"> qayb ka noqo adeegyadan cibaadada si wada jir ah. >
< start="45.61" dur="2.91"> Waxaan heysanaa heeso iyo cibaado, >
< start="48.52" dur="2.44"> oo waxaan soo bixin doonaa eray ka erayga Eebbe. >
< start="50.96" dur="3.01"> Waad ogtahay, sidaan uga fikiray tan, >
< start="53.97" dur="2.15"> dariiqa, marka hore waxaan u baahanahay inaan kuu sheego. >
< start="56.12" dur="3.84"> Waxaan u arkaayay inay iyagu na joojinayaan kulanka. >
< start="59.96" dur="3.6"> Oo sidaas toddobaadkan, waxaan lahaa Istuudiyaha Saddleback >
< start="63.56" dur="1.32"> u dhaqaaqay garaashkeyga. >
< start="64.88" dur="2.34"> Runtii tan waxaan ku garaacayaa garaashkayga. >
< start="67.22" dur="2.46"> Shaqaalaha farsamada ee qalfoofkayga. >
< start="69.68" dur="1.979"> Kaalay oo soo gala, wiilal, dhahaa qofkasta hiwaayadiisa. >
< start="71.659" dur="2.101"> (qosol) >
< start="73.76" dur="3.12"> Waxay gacan ka gaysteen inay u wareegaan halkan oo ay dejiyaan dhammaantood >
< start="76.88" dur="4.74"> si aanu toddobaad kasta kugula hadli karno. >
< start="81.62" dur="3.32"> Hadda, sida aan uga fikiray waxa aan qarin karno >
< start="84.94" dur="3.22"> inta lagu guda jiro xiisaddan COVID-19, >
< start="88.16" dur="2.98"> Isla markiiba waxaan ka fikiray kitaabka Yacquub. >
< start="91.14" dur="2.67"> Buugga Yacquub waa buug aad u yar >
< start="93.81" dur="2.15"> dhamaadka dhamaadka Axdiga Cusub. >
< start="95.96" dur="3.81"> Laakiin waa mid wax ku ool ah isla markaana aad waxtar u leh, >
< start="99.77" dur="5"> oo waxaan buuggan ugu yeedhay iimaan shaqaynaya kolka noloshu aanu shaqayn. >
< start="105.56" dur="3.67"> Waxaanan isleeyahay in hada wax loobaahanyahay, >
< start="109.23" dur="4.75"> Ma waxaan u baahanahay caqiido shaqeysa marka noloshu aysan shaqeyn. >
< start="113.98" dur="2.86"> Sababtoo ah si fiican uma shaqeynayaan hadda. >
< start="116.84" dur="2.75"> Oo sidaas, maanta, toddobaadkan, waxaan bilaabi doonaa >
< start="119.59" dur="3.25"> safar wadajir ah oo ku dhiirigelin doona >
< start="122.84" dur="1.03"> iyada oo loo marayo xiisaddan. >
< start="123.87" dur="3.22"> Mana doonayo inaad seegto farriimahan midkood. >
< start="127.09" dur="4.1"> Maxaa yeelay buugga Yacquub wuxuu dhab ahaan ka hadlayaa 14 waaweyn >
< start="131.19" dur="4.34"> dhismayaasha xannibaadda nolosha, 14 arrimood oo muhiim ah oo nolosha ah, >
< start="135.53" dur="3.76"> 14 meelood oo midkastoo idinka mid ahi uu yahay >
< start="139.29" dur="1.91"> horeyba ula tacaashay noloshaada, >
< start="141.2" dur="3.17"> waana inaad wax ka qabataa mustaqbalka. >
< start="144.37" dur="3.52"> Tusaale ahaan, cutubka koowaad ee James, >
< start="147.89" dur="1.6"> Bal aan wax yar ka siiyo dulucda buugga. >
< start="149.49" dur="1.42"> Waa afar cutub oo keliya. >
< start="150.91" dur="2.99"> Cutubka koowaad, wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatooyinka. >
< start="153.9" dur="1.77"> Hadana maanta ayaan ka hadlaynaa. >
< start="155.67" dur="4.13"> Waa maxay ujeeddada Ilaahay dhibaatooyinkaaga? >
< start="159.8" dur="1.6"> Ka dib waxay ka hadlaysaa xulashooyinka. >
< start="161.4" dur="1.62"> Sideed uga fikirtaa maskaxdaada? >
< start="163.02" dur="2.085"> Sideed ku ogaaneysaa goorta aad joogtid, goorta la tagayo? >
< start="165.105" dur="2.335"> Sideed ku ogaataa waxa la sameeyo, sideed u go'aan u gaartaa? >
< start="167.44" dur="2.41"> Ka dibna waxay ka hadlaysaa jirrabaadda. >
< start="169.85" dur="3.29"> Oo waxaan eegi doonaa sida aad uga adkaato jirrabaadaha caamka ah >
< start="173.14" dur="3.24"> noloshaada oo umuuqda inay sii waddo inay kugu sii wado. >
< start="176.38" dur="2.04"> Ka dibna waxay ka hadleysaa hagidda. >
< start="178.42" dur="2.68"> Oo waxay ka hadleysaa sida aan ugu duceyn karno Kitaabka Quduuska ah. >
< start="181.1" dur="2.24"> Kaliya ma aqrino, laakiin ha ku barakeeyo. >
< start="183.34" dur="1.56"> Intaas oo dhan waa cutubka koowaad. >
< start="184.9" dur="2.36"> Hadana waxaan eegi doonaa kuwa usbuucyada soo socda. >
< start="187.26" dur="2.7"> Cutubka Labaad wuxuu ka hadlayaa xiriirka. >
< start="189.96" dur="3.06"> Waxaan eegaynaa sida aad ula dhaqanto dadka. >
< start="193.02" dur="2.628"> Iyo dadka ay tahay inay guriga joogaan >
< start="195.648" dur="4.242"> dhamaan reerka wada jooga, caruurta iyo hooyooyinka iyo aabayaasha, >
< start="199.89" dur="2.32"> dadkuna waxay kuxiran karaan dareemayaasha kale. >
< start="202.21" dur="2.74"> Taasi waxay noqon doontaa fariin muhiim ah oo ku saabsan cilaaqaadka. >
< start="204.95" dur="1.39"> Markaas waxay ka hadlaysaa iimaanka. >
< start="206.34" dur="4.76"> Sidee ayaad runtii ugu kalsoonaataa Ilaah markii aadan sidaa ahayn >
< start="211.1" dur="2.18"> iyo marka arrimuhu u socdaan jihada qaldan? >
< start="213.28" dur="1.64"> Intaas oo dhan waa cutubka labaad. >
< start="214.92" dur="3.32"> Cutubka saddexaad, waxaan uga hadli karnaa sheekooyinka. >
< start="218.24" dur="1.66"> Awooda wada hadalka. >
< start="219.9" dur="2.12"> Oo kanina waa mid ka mid ah aayadaha ugu muhiimsan >
< start="222.02" dur="3.73"> Kitaabka Quduuska ah oo ku saabsan sida aad afkaaga u maamushid. >
< start="225.75" dur="2.25"> Taasi waa muhiim haddii aan ku jirno qalalaase iyo haddii kale. >
< start="228" dur="2.27"> Hadana waxay ka hadlaysaa saaxiibtinimada. >
< start="230.27" dur="2.21"> Oo waxay na siisaa macluumaad aad wax ku ool ah >
< start="232.48" dur="2.71"> sidaad u dhisaan saaxiibo xariif ah >
< start="235.19" dur="2.7"> oo iska ilaali saaxiibtinimada aan caqliga lahayn. >
< start="237.89" dur="2.24"> Taasi waa cutubka saddexaad. >
< start="240.13" dur="3.5"> Cutubka afraad wuxuu ku saabsan yahay isku dhac. >
< start="243.63" dur="2.39"> Iyo cutubka afaraad, waxaan uga hadlaynaa >
< start="246.02" dur="1.88"> sidee looga fogaadaa doodaha. >
< start="247.9" dur="1.56"> Taasna waxay noqon doontaa wax runtii caawimaad leh. >
< start="249.46" dur="2.78"> Markii xiisadaha kor u kacayaan iyo jahwareerku sii kordhayo, >
< start="252.24" dur="2.94"> maadaama dadku shaqada ka maqan yihiin, sidee baad uga fogaataan doodaha? >
< start="255.18" dur="2.03"> Ka dibna wuxuu ka hadlayaa xukunka dadka kale. >
< start="257.21" dur="2.74"> Sideed uga joogsaneysaa Cayaarta Eebbe? >
< start="259.95" dur="1.84"> Taasi waxay noo horseedi doontaa nabad badan nolosheena >
< start="261.79" dur="1.08"> haddii aan sidaas samayn karno. >
< start="262.87" dur="1.67"> Ka dibna waxay ka hadlaysaa mustaqbalka. >
< start="264.54" dur="1.82"> Sideed u qorsheyneysaa mustaqbalka? >
< start="266.36" dur="1.56"> Intaas oo dhan waa cutubka afaraad. >
< start="267.92" dur="2.75"> Haddaba, cutubka ugu dambeeya, cutubka shanaad, ayaan kuu sheegay >
< start="270.67" dur="0.98"> waxaa jiray afar cutub, dhab ahaantii way jiraan >
< start="271.65" dur="1.683"> shan cutub ee James. >
< start="274.327" dur="2.243"> Waxaan kahadalnaa lacagta. >
< start="276.57" dur="3.65"> Waxay kaloo ka hadleysaa sida caqligaaga u caqli badan. >
< start="280.22" dur="1.73"> Kadibna waxaan eegaynaa dulqaad. >
< start="281.95" dur="3.26"> Maxaad sameyneysaa markaad Ilaahay sugeyso? >
< start="285.21" dur="1.92"> Qolka ugu adag ee lagu fadhiisto >
< start="287.13" dur="3.87"> wuxuu ku jiraa qolka sugitaanka markii aad degdeg u degto oo Ilaahna ma aha. >
< start="291" dur="1.29"> Kadibna waxaan eegaynaa salaadda, >
< start="292.29" dur="2.07"> taas oo ah farriinta ugu dambaysa ee aan eegi doonno. >
< start="294.36" dur="1.94"> Sideed u soo duceysaa dhibaatooyinkaaga? >
< start="296.3" dur="2.58"> Baybalku wuxuu leeyahay hab lagu tukado oo loo helo jawaabo, >
< start="298.88" dur="2.29"> oo waxaa jira hab aan loo tukan. >
< start="301.17" dur="1.27"> Anaguna waanu eegaynaa taas. >
< start="302.44" dur="3.763"> Hadda maanta, waxaan eegeynaa lixdii aayadood ee ugu horreeyay >
< start="306.203" dur="2.072"> ee kitaabka Yacquub. >
< start="308.275" dur="5"> Haddii aadan haysan Kitaabka Quduuska ah, ka dib waxaan rabaa inaad soo dejiso >
< start="313.46" dur="3.73"> ka baxsan shabakaddaan dulucda, qoraalada barista, >
< start="317.19" dur="2.02"> maxaa yeelay dhamaan aayadaha aan eegno >
< start="319.21" dur="2.04"> Ma jiraan dulucdaada. >
< start="321.25" dur="3.22"> Yacquub cutubka koowaad, lixda aayadood ee ugu horreeya. >
< start="324.47" dur="4.07"> Oo Baybalku wuxuu leeyahay tan marka ay ka hadlayso >
< start="328.54" dur="2.33"> inaad wax ka qabato dhibaatooyinkaaga. >
< start="330.87" dur="2.35"> Marka hore, Yacquub 1: 1 ayaa leh sidan. >
< start="333.22" dur="5"> Yacquub, oo ah addoonkii Ilaah iyo Rabbi Ciise Masiix, >
< start="338.86" dur="4.18"> to 12ka qabiil ee ku kala firidhsan quruumaha dhexdooda, salaan. >
< start="343.04" dur="2.23"> Haddaba, aan xoogaa halkaan joogno oo aan dhaho >
< start="345.27" dur="2.95"> Kani waa hordhaca ugu halista badan >
< start="348.22" dur="1.71"> ee buug kasta oo Kitaabka Quduuska ah. >
< start="349.93" dur="2.01"> Sababta oo ah waad ogtahay cidda James ahaa? >
< start="351.94" dur="3.073"> Wuxuu ahaa walaalkii nabi Ciise. >
< start="355.013" dur="1.507"> Maxaad uga jeeddaa taas >
< start="356.52" dur="2.19"> Waxay ka dhigan tahay inuu ahaa Maryan iyo ina Yuusuf. >
< start="358.71" dur="2.899"> Ciise wuxuu ahaa wiilkii Maryan. >
< start="361.609" dur="4.591"> Isagu ma ahayn wiilkii Yuusuf sababtiisii ​​Ilaah wuxuu ahaa aabaha Ciise. >
< start="366.2" dur="2.47"> Laakiin Kitaabku wuxuu noo sheegayaa in Maryan iyo Yuusuf >
< start="368.67" dur="3.52"> caruur badan bay dhaleen goor dambe, oo xitaa na siiya magacyadooda. >
< start="372.19" dur="2.87"> James ma ahayn Masiixi. >
< start="375.06" dur="2.27"> Isagu ma uusan ahayn mid raacsan Masiixa. >
< start="377.33" dur="3.54"> Ma uusan rumeysan inuu walaalkiis barkiisa yahay Masiixa >
< start="380.87" dur="1.78"> inta lagu gudajiray ciise dhammaantiis. >
< start="382.65" dur="1.29"> Wuxuu ahaa nin shaki badan. >
< start="383.94" dur="3.14"> Taasna waad moodaa, inan yar yahow rumaysan >
< start="387.08" dur="3.22"> walaal weyn, sifiican, taasi waxay noqon laheyd wax qurux badan. >
< start="390.3" dur="3.81"> Maxaa James ka dhigay inuu rumayste Ciise Masiix? >
< start="394.11" dur="1.56"> Qiyaamaha. >
< start="395.67" dur="4.42"> Markuu Ciise ka soo sara kacay dhimashadii oo socday >
< start="400.09" dur="1.96"> 40 maalmood oo kale ayuu Yacquub arkay, >
< start="402.05" dur="3.79"> wuxuu rumaystay ka dibna wuxuu noqday hogaamiyaha >
< start="405.84" dur="2.09"> Kaniisadda Yeruusaalem. >
< start="407.93" dur="3.82"> Markaa haddii qof uun xaq u lahaa inuu magacyo ku tuuro, waa ninkaan. >
< start="411.75" dur="4.06"> Waa uu dhihi karay, James, ninka ku soo koray Ciise. >
< start="415.81" dur="2.95"> Yacquub, walaalkiis nus Ciise. >
< start="418.76" dur="3.87"> Yacquub, saaxiibkii ugu wanaagsanaa ee Ciise ee soo korayay. >
< start="422.63" dur="1.47"> Waxyaabaha noocaas ah, laakiin isagu ma sameeyo. >
< start="424.1" dur="2.68"> Wuxuu si fudud u leeyahay James, oo ah addoonkii Ilaah. >
< start="426.78" dur="4.97"> Darajadiisa kor uma qaado, umana hormarinayo shaqadiisa. >
< start="431.75" dur="2.24"> Laakiin markaa aayadda labaad, wuxuu bilaabayaa inuu galo >
< start="433.99" dur="5"> arintaan oo ah tii ugu horeysey ee Eebbe ujeeddooyinkaaga ka mid ah. >
< start="439.07" dur="1.86"> Aan kuu aqriyo. >
< start="440.93" dur="2.41"> Wuxuu yidhi, markay jiraan noocyo kasta oo tijaabooyin ah >
< start="444.2" dur="5"> Dad badan oo noloshaada gala, ha u xanaaqin sidii kuwo wax xadgudbaya, >
< start="449.52" dur="3.15"> laakiin ku soo dhowow sidii saaxiibbadood. >
< start="452.67" dur="2.82"> Ogaada inay u yimaadeen inay tijaabiyaan iimaankaaga, >
< start="455.49" dur="4.8"> iyo inaan idinku soo saaro tayada adkaysiga. >
< start="460.29" dur="4.32"> Laakiin ha sii socdo hawshaas illaa inta dulqaadkaas la gaadhay >
< start="464.61" dur="5"> si buuxda ayaa loo horumariyey, oo waxaad noqon doontaa qof >
< start="470.01" dur="5"> ee dabeecad qaan iyo daacadnimo >
< start="475.11" dur="2.71"> oo aan lahayn dhibco daciif ah. >
< start="477.82" dur="2.24"> Taasi waa tarjumaadda Phillips >
< start="480.06" dur="2.73"> of James cutubka koowaad, aayadaha laba ilaa lix. >
< start="482.79" dur="3.377"> Hadda, wuxuu leeyahay marka dhammaan noocyada tijaabooyinkaadu ay soo galaan noloshaada >
< start="486.167" dur="2.963"> Isaguna wuxuu ku yidhi, Ha u sii jeedin >
< start="489.13" dur="1.69"> sidii carqalad, ku soo dhowow sidii saaxiibo. >
< start="490.82" dur="2.57"> Wuxuu dhahay, waxaad dhib ku qabeen, faraxsanow. >
< start="493.39" dur="2.09"> Dhibaatooyin ayaa ku habsaday, ku reyreeya. >
< start="495.48" dur="1.807"> Dhibaatooyin ayaa ku soo gaadhay, dhoola caddeyn. >
< start="499.51" dur="0.87"> Hadda, waan ogahay waxa aad ka fekereyso. >
< start="500.38" dur="1.94"> Waad tagaysaa, ma aniga ayaa iga xanaaqsan? >
< start="502.32" dur="3.15"> Maxaan ugu faraxsanahay COVID-19? >
< start="505.47" dur="5"> Maxay tahay sababta aan u soo dhaweynayo tijaabooyinkan noloshayda? >
< start="510.6" dur="2.31"> Sidee taasi macquul u tahay? >
< start="512.91" dur="3.74"> Furaha habdhaqankan oo dhan ee dayactirka >
< start="516.65" dur="2.85"> dabeecad wanaagsan inta lagu jiro dhibaatada >
< start="519.5" dur="3.65"> eraygu waa garow, waa erayga xaqiiqsada. >
< start="523.15" dur="2.19"> Wuxuu yidhi, markay tijaabooyinka noocan oo kale ahi jiraan >
< start="525.34" dur="2.99"> Dad badan oo noloshaada gala, ha u xanaaqin sidii kuwo wax xadgudbaya, >
< start="528.33" dur="4.89"> laakiin u soo dhowow sidii saaxiibbadood, oo garo, oo garo, >
< start="533.22" dur="3.75"> Waxay u yimaadaan inay tijaabiyaan iimaankaaga. >
< start="536.97" dur="3.839"> Hadana waa uu sii wadaa, waxa noloshooda u soo saara. >
< start="540.809" dur="5"> Waxa uu halkan ka leeyahay waa guusha aad ka gaadhay maaraynta >
< start="545.99" dur="4.44"> usbuucyada inaga horreeya masiibada COVID-19 >
< start="550.43" dur="2.87"> taasi waa hadda adduunka oo dhan, iyo inbadan iyo in ka badanba >
< start="553.3" dur="3.11"> Quruumihii way xidheen, oo way iska xidheen >
< start="556.41" dur="2.31"> makhaayadaha iyo waxay xirayaan bakhaarada, >
< start="558.72" dur="1.89"> iskuuladana way xidhaan, >
< start="560.61" dur="1.57"> Waxay xidhaan kaniisadaha, >
< start="562.18" dur="1.69"> meel walbana way xidhaan >
< start="563.87" dur="3.86"> halkaasoo dadku isugu yimaadaan, iyo sida halkan Orange County, >
< start="567.73" dur="4.29"> Halka aan naloo oggolayn inaan cidna la kulanno bishan. >
< start="572.02" dur="3.75"> Wuxuu yiri, guusha aad ka gaartay xallinta dhibaatooyinkaas >
< start="575.77" dur="3.49"> waxaa lagu go'aamin doonaa fahamkaaga. >
< start="579.26" dur="1.3"> Fahamkaaga. >
< start="580.56" dur="3.24"> Iyo sidaad u aragto dhibaatooyinkaas. >
< start="583.8" dur="3.69"> Waa waxa aad garato, waa waxa aad ogtahay. >
< start="587.49" dur="3.79"> Haddaba, waxa ugu horreeya ee qoraalkan ku jira ee aan doonayo inaad gartaan >
< start="591.28" dur="3.957"> waa in Ilaah ina siiyo afar xusuusin oo ku saabsan dhibaatooyinka. >
< start="595.237" dur="2.253"> Waxaad jeclaan lahayd inaad kuwan qorto. >
< start="597.49" dur="2.07"> Afar xusuusinood oo kusaabsan dhibaatooyinka noloshaada, >
< start="599.56" dur="2.35"> kuwaas oo ay ku jiraan qalalaasaha aan hadda marayno. >
< start="601.91" dur="5"> Midda koowaad, wuxuu leeyahay marka hore, dhibaatooyinka waa lama huraan. >
< start="607.42" dur="2.34"> Dhibaatooyinka waa lama huraan. >
< start="609.76" dur="1.04"> Hadda, sidee ayuu u leeyahay hadalkaasi? >
< start="610.8" dur="4.33"> Wuxuu yidhi, goorta ay noocyo badan oo tijaabooyin ahi yimaadaan. >
< start="615.13" dur="4.41"> Isagu ma yiraahdo haddii nooc kasta oo tijaabooyin ah ay yimaadaan, wuxuu dhahaa goorta. >
< start="619.54" dur="1.72"> Waad ku kalsoonaan kartaa >
< start="621.26" dur="3.27"> Tani maahan jannada meesha ay wax walba ku qumman yihiin. >
< start="624.53" dur="2.66"> Tani waa Dunida oo wax walba lagu jebiyo. >
< start="627.19" dur="2.05"> Isaguse wuxuu dhahayaa waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyin, >
< start="629.24" dur="3.44"> dhibaatooyin ayaa kugu dhici doona, waad ku kalsoonaan kartaa >
< start="632.68" dur="2.37"> waad ka iibsan kartaa saamiyada dhexdeeda. >
< start="635.05" dur="2.99"> Hadda, tani maahan wax uu James kaligiis yiraahdo. >
< start="638.04" dur="1.62"> Dhamaan Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegaya. >
< start="639.66" dur="2.77"> Ciise wuxuu yiri adduunyada waxaad ku arki doontaa tijaabooyin >
< start="642.43" dur="3.68"> iyo jirrabaadda, oo waxaad heli doontaan dhib. >
< start="646.11" dur="2.29"> Wuxuu yiri waxaad nolosha ku yeelan doontaa dhibaatooyin. >
< start="648.4" dur="3.07"> Marka maxaan u la yaabnay markaan dhibaatooyin nahay? >
< start="651.47" dur="1.632"> Peter wuxuu yidhi ha la yaabin >
< start="653.102" dur="2.558"> marka aad dhex marto tijaabooyin adag. >
< start="655.66" dur="1.786"> Wuxuu yiri ha u dhaqmin sidii inay tahay wax cusub. >
< start="657.446" dur="2.744"> Qof walbaa wuxuu soo maraa waqtiyo adag. >
< start="660.19" dur="2.04"> Noloshu way adag tahay. >
< start="662.23" dur="2.53"> Tani ma aha jannada, tanina waa Dunida. >
< start="664.76" dur="3.18"> Cidna isma difaaci karo, cidna lama go'doomin, >
< start="667.94" dur="2.94"> qofna kuma xirna, cidna lagama dhaafo. >
< start="670.88" dur="1.73"> Wuxuu dhahaa waxaad dhib kala kulantid >
< start="672.61" dur="2.78"> maxaa yeelay waa lama huraan. >
< start="675.39" dur="3.84"> Waad ogtahay, Waxaan xasuustaa hal jeer markii aan kulleejada ku jiray. >
< start="679.23" dur="2.27"> Sanado badan kahor, aniga ayaa soo marayay >
< start="681.5" dur="1.71"> waqtiyo runti adag. >
< start="683.21" dur="3.09"> Oo waxaan bilaabay salaadda, waxaan idhi, "Ilaahow samir ii dulqaado." >
< start="686.3" dur="2.91"> Oo halkii tijaabooyinku ay ka sii fiicnaanayaan, way ka sii daayeen. >
< start="689.21" dur="2.22"> Markaasaan idhi, "Ilaahow, waxaan u bahanahay samir," >
< start="691.43" dur="1.72"> Dhibaatooyinkuna way sii xumaadeen. >
< start="693.15" dur="2.43"> Markaasaan idhi, "Ilaahow, waxaan u bahanahay samir," >
< start="695.58" dur="2.93"> wayna ka sii daayeen. >
< start="698.51" dur="1.77"> Maxaa socday? >
< start="700.28" dur="1.82"> Hagaag, ugu dambeynti waxaan gartay in ku dhawaad ​​lix bilood kadib, >
< start="702.1" dur="2.64"> Waxaan ahaa qof samir badan oo ka badan markii aan bilaabay, >
< start="704.74" dur="2.07"> in habka Ilaah i baray samir >
< start="706.81" dur="3.2"> wuxuu soo maray dhibaatooyinkaas. >
< start="710.01" dur="2.85"> Hadda, dhibaatooyinku ma aha qaar nooc koorsada doorashada ah >
< start="712.86" dur="2.44"> Inaad doorato noloshaada. >
< start="715.3" dur="2.863"> Maya, waa loo baahan yahay, kama bixi kartid iyaga. >
< start="719.01" dur="3.71"> Si looga qalinjabiyo dugsiga nolosha, >
< start="722.72" dur="1.96"> waxaad ubaahantahay inaad gasho iskuulka garaacista adag. >
< start="724.68" dur="2.87"> Dhibaatooyin ayaad la kulmi doontaa, iyagu waa lama huraan. >
< start="727.55" dur="1.35"> Taasi waa waxa Kitaabka Quduuska ahi leeyahay. >
< start="728.9" dur="2.43"> Waxa labaad ee Kitaabka Quduuska ahi ka leeyahay dhibaatooyinka waa tan. >
< start="731.33" dur="3.923"> Dhibaatooyinku waa kuwa is bedbeddelaya, taas macnaheedu waa isku wada mid maaha. >
< start="735.253" dur="2.817"> Dhibaatooyin isku mid ah kuma wada heysatid midba midka kale. >
< start="738.07" dur="1.89"> Waxaad ka heleysaa kuwo badan oo kala duwan. >
< start="739.96" dur="2.11"> Kaliya maahan inaad hesho, laakiin waxaad helaysaa kuwo ka duwan. >
< start="742.07" dur="5"> Wuxuu dhahaa markaad tijaabinaysid, markii aad dhibaatooyin isku nooc ah leedahay. >
< start="748.25" dur="2.09"> Waad wareegi kartaa taas haddii aad qoreyso qoraal. >
< start="750.34" dur="3.54"> Markay dhammaan noocyada tijaabooyinkaadu soo galaan noloshaada. >
< start="753.88" dur="3.25"> Waad ogtahay, inaan ahay qof beerta ka shaqaysta, marna baan bartay, >
< start="757.13" dur="2.32"> oo waxaan ka ogaaday in dawladda halkan >
< start="759.45" dur="2.18"> ee dalka Mareykanka ayaa loo kala saaray >
< start="761.63" dur="3.493"> 205 noocyo kala duwan oo ah haramaha. >
< start="765.123" dur="4.767"> Waxaan u malaynayaa in 80% iyaga ka mid ah ay ku koraan beertayda. (qosol) >
< start="769.89" dur="2.52"> Waxaan inta badan u maleynayaa in marka aan korayo khudradda, >
< start="772.41" dur="2.85"> Waxaan ku dallacayaa gelitaanka Warren's Weed Farm. >
< start="775.26" dur="3.62"> Laakiin waxaa jira noocyo badan oo iniin ah >
< start="778.88" dur="1.82"> waxaa jira noocyo badan oo tijaabooyin ah, >
< start="780.7" dur="1.76"> dhibaatooyin badan ayaa jira. >
< start="782.46" dur="2.282"> Waxay ku yimaadaan cabbir walba, waxay ku yimaadaan qaab kasta. >
< start="784.742" dur="2.898"> Waxaa jira in ka badan 31 dhadhan. >
< start="787.64" dur="2.75"> Ereygan halkan, nooc kasta, halka uu leeyahay >
< start="790.39" dur="1.55"> noloshaada waxaa kujira nooc kasta oo tijaabo ah. >
< start="791.94" dur="4.26"> dhab ahaantii waxay Giriiggu ka dhigan tahay midabbo badan. >
< start="796.2" dur="2.795"> Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira hoosyaal badan oo walaac badan >
< start="798.995" dur="2.205"> noloshaada, miyaad aqbali doontaa taas? >
< start="801.2" dur="1.9"> Waxaa jira hadhyo badan oo walaac badan. >
< start="803.1" dur="1.62"> Dhammaantood isku mid ma wada eka. >
< start="804.72" dur="2.67"> Waxaa jira walaac dhaqaale, waxaa jira walaac la xiriira, >
< start="807.39" dur="2.37"> waxaa jira walaac caafimaad, waxaa jira walaac xagga jirka ah, >
< start="809.76" dur="1.62"> waqti culays ayaa jira. >
< start="811.38" dur="5"> Wuxuu dhahayaa inay dhamaantood midabyo kala duwan yihiin. >
< start="816.41" dur="2.82"> Laakiin hadaad baxdid oo aad iibsato gaari oo aad rabto >
< start="819.23" dur="3.44"> midab gaar ah, markaa waa inaad sugtaa. >
< start="822.67" dur="2.98"> Ka dibna markii la sameeyo, ka dib waxaad helaysaa midabkaagii caadiga ahaa. >
< start="825.65" dur="2.01"> Taasi dhab ahaantii waa erayga halkan lagu isticmaalay. >
< start="827.66" dur="4.99"> Waa midab caadi ah, tijaabooyin badan oo noloshaada kujira. >
< start="832.65" dur="2.14"> Eebbe wuu u oggolaanayaa sabab. >
< start="834.79" dur="3.07"> Dhibaatooyinkaaga qaar ayaa caadiyan caado ahaan loo sameeyay. >
< start="837.86" dur="1.842"> Qaar iyaga ka mid ah oo aan dhammaanteen isla soo aragnay, >
< start="839.702" dur="2.908"> sidan oo kale, COVID-19. >
< start="842.61" dur="1.95"> Laakiin isagu wuxuu leeyahay dhibaatooyinka waa kuwa doorsooma. >
< start="844.56" dur="2.845"> Iyo waxa aan ula jeedo taas waa inay ku kala duwan yihiin xoogga. >
< start="847.405" dur="3.143"> Si kale haddii loo dhigo, sida ay u adag yihiin. >
< start="850.548" dur="3.792"> Waxay ku kala duwan yihiin inta jeer, waana sidaas muddo. >
< start="854.34" dur="1.421"> Annagu garan mayno inta ay tani soconayso. >
< start="855.761" dur="2.699"> Annagu garan mayno sida ay u dhib badnaan karto. >
< start="858.46" dur="2.197"> Waxaan arkay calaamad maalin kale oo leh, >
< start="860.657" dur="3.98"> Nolol walba roob ayaa ku dhici doona >
< start="864.637" dur="2.743"> "laakiin tani waa wax lagu qoslo." (qosol) >
< start="867.38" dur="1.9"> Aniguna waxay ila tahay taasi waa sidaas >
< start="869.28" dur="1.77"> dad badan ayaa dareemaya hadda. >
< start="871.05" dur="1.92"> Tani waa wax lagu qoslo. >
< start="872.97" dur="3.07"> Dhibaatooyinka waa lama huraan oo wey isbeddelaan. >
< start="876.04" dur="2.86"> Waxyaabaha seddexaad ee James ayaa sheegaya sidaa darteed waxba kama naxno >
< start="878.9" dur="2.87"> waa dhibaatooyinka aan la saadaalin karin. >
< start="881.77" dur="1.6"> Lama saadaalin karo. >
< start="883.37" dur="4.01"> Wuxuu dhahay markii tijaabooyin badan ay noloshaada galaan, >
< start="887.38" dur="2.05"> hadaad qoreyso qoraal, wareeji weedhaas. >
< start="889.43" dur="3.13"> Waxay ku buuxiyeen noloshaada. >
< start="892.56" dur="3.28"> Eeg, dhibna weligeed ma imaan markaad u baahatid >
< start="895.84" dur="1.6"> ama markii aadan u baahnayn. >
< start="897.44" dur="1.97"> Kaliya waxay timaadaa markay rabto inay timaado. >
< start="899.41" dur="1.97"> Taasi waa qayb ka mid ah sababta ay dhibaato u tahay. >
< start="901.38" dur="3.05"> Dhibaatooyinka ayaa yimaadda waqtiga ugu habboon. >
< start="904.43" dur="1.582"> Weligaa ma dareentay inaad dhibaato dareento >
< start="906.012" dur="2.778"> soo galay noloshaada, adigu tag, hadda maya. >
< start="908.79" dur="2.51"> Dhab ahaantii, sida hadda? >
< start="911.3" dur="3.82"> Halkan Kaniisadda Saddleback, waxaan ku jirnay olole weyn >
< start="915.12" dur="2.45"> oo ku riyoonaya mustaqbalka. >
< start="917.57" dur="3.27"> Hadana si lama filaan ah ayaa coronavirus ku dhacay. >
< start="920.84" dur="2.06"> Oo waan tegayaa, hadda ma aha. >
< start="922.9" dur="1.673"> (chuckles) Hadda ma ahan. >
< start="926.75" dur="3.073"> Weligaa miyaad qabatay taayir fidsan markii aad soo daahay? >
< start="931.729" dur="2.361"> Ma helaysid taayir fidsan markaad heshay waqti badan. >
< start="934.09" dur="1.823"> Waxaad ku deg degtay inaad meel aado. >
< start="937.12" dur="4.08"> Waxay lamid tahay sida ilmuhu u lebbisto dharkaaga cusub >
< start="941.2" dur="4.952"> sida aad ugu baxeyso howlgal fiid ah. >
< start="946.152" dur="2.918"> Ama kala jeexjeexa surwaalkaaga intaadan hadlin. >
< start="949.07" dur="2.55"> Taasoo runtii igu dhacday hal mar >
< start="951.62" dur="1.713"> Axad waqti dheer kahor. >
< start="956" dur="4.64"> Dadka qaar, waa dad dulqaad badan, >
< start="960.64" dur="1.77"> iyagu ma sugi karaan albaabka rogida. >
< start="962.41" dur="1.72"> Waa inay wax bartaan, waa inay sameeyaan, >
< start="964.13" dur="2.38"> hadda waa ay sameeyaan, hadda waa sameeyaan. >
< start="966.51" dur="3.99"> Waxaan xasuustaa sanado badan kahor inaan Jabaan ahaa, >
< start="970.5" dur="3.34"> oo waxaan taaganahay tareenka dhulka hoostiisa ku suga ee dhulka hoostiisa mara >
< start="973.84" dur="2.55"> inuu yimaado, iyo markuu furay, albaabadu way furmeen, >
< start="976.39" dur="3.33"> iyo nin dhalinyaro ah oo reer Japan ah isla markiiba >
< start="979.72" dur="4.49"> mashxarad ayaa igu soo dhacday markii aan halkaas taaganahay. >
< start="984.21" dur="5"> Oo waxaan is idhi, waa maxay aniga, sababta hadda? >
< start="989.9" dur="3.583"> Waa wax aan la saadaalin karin, waxay yimaaddaan marka aadan u baahnayn em. >
< start="994.47" dur="2.94"> Si dhif ah ayaad u sii saadaalin kartaa dhibaatooyinka noloshaada. >
< start="997.41" dur="3.69"> Haddaba ogsoonow, waxay leedahay goorta nooc kasta oo tijaabooyin ah, goorta, >
< start="1001.1" dur="3"> waa lama huraan, dhammaan noocyada, way isbeddelaan, >
< start="1004.1" dur="3.98"> dad badan ayaa noloshaada gala, taasi waa wax aan la saadaalin karin, >
< start="1008.08" dur="3.213"> wuxuu leeyahay ha u diidin kuwa carqaladeeya. >
< start="1012.19" dur="1.01"> Muxuu halkan ka sheegayaa? >
< start="1013.2" dur="2.16"> Hagaag, aniga ayaan si faahfaahsan u sharixi doonaa. >
< start="1015.36" dur="2.6"> Laakiin halkan waa waxa afaraad ee Baybalku ka leeyahay dhibaatooyinka. >
< start="1017.96" dur="2.553"> Dhibaatooyinku waa ujeedo. >
< start="1021.4" dur="2.69"> Dhibaatooyinku waa ujeedo. >
< start="1024.09" dur="3.07"> Eebbe wax walba isagaa u leh ujeed. >
< start="1027.16" dur="2.72"> Xitaa waxyaabaha xun ee ku dhaca nolosheena, >
< start="1029.88" dur="2.16"> Eebbe wanaagga wuu ka soo bixin karaa. >
< start="1032.04" dur="1.64"> Ilaahay qasab kuma aha inuu dhibaato kasta keeno. >
< start="1033.68" dur="2.62"> Dhibaatooyinka badankood ee aan nafteenna u geysto. >
< start="1036.3" dur="2.1"> Dadku waxay dhahaan, maxay dadku u xanuunsadaan? >
< start="1038.4" dur="3.69"> Hagaag, hal sabab ayaa ah inaanan sameynin waxa Eebbe ina faray inaan sameyno. >
< start="1042.09" dur="3.02"> Haddaynu cunnay wuxuu Ilaahay ina faray inaan wax cunno, >
< start="1045.11" dur="2.71"> haddii aan u seexan lahayn sida Eebbe noogu yidhi nasasho, >
< start="1047.82" dur="3.28"> haddii aan jimicsano sida uu Eebbe noogu sheegay jimicsi, >
< start="1051.1" dur="3.16"> haddii aanaan u oggolaan shucuur-xumada nolosheena >
< start="1054.26" dur="2.06"> sida Ilaah wuxuu sheegayaa, haddii aan addeecinno Ilaah, >
< start="1056.32" dur="2.65"> dhibaatooyinkayaga badankood kuma qabno. >
< start="1058.97" dur="3.07"> Daraasadaha ayaa muujiyey in ku dhawaad ​​80% dhibaatooyinka caafimaad >
< start="1062.04" dur="3.57"> wadankan, America dhexdeeda, waxaa sababa waxa la yiraahdo >
< start="1065.61" dur="3"> xulashooyinka qaab nololeed ee daba dheeraada. >
< start="1068.61" dur="3.05"> Si kale haddii loo dhigo, kaliya wax sax ah kama qabanno. >
< start="1071.66" dur="1.14"> Ma yeelno waxa caafimaadka qaba. >
< start="1072.8" dur="2.66"> Badanaa waxaan sameynaa sheyga is-burburin. >
< start="1075.46" dur="2.58"> Laakiin waxa uu sheegayo waa halkaan, dhibaatooyinka waa ujeedo. >
< start="1078.04" dur="3.53"> Wuxuu dhahay markii aad la kulanto dhibaatooyin, >
< start="1081.57" dur="3.46"> garowsadeen inay wax soo saaraan. >
< start="1085.03" dur="3.56"> Goobaabi weedhaas, waxay u yimaadaan inay wax soo saaraan. >
< start="1088.59" dur="3.22"> Dhibaatooyinka ayaa wax soo saar leh. >
< start="1091.81" dur="2.23"> Hadda, iyagu si otomaatig ah waxsoosaar uma sameeyaan. >
< start="1094.04" dur="3.06"> Fayraskan COVID, hadaanan ka jawaabin maalinta saxda ah, >
< start="1097.1" dur="3.35"> noloshayda kuma soo saari doono wax weyn. >
< start="1100.45" dur="2.17"> Laakiin haddaan sida saxda ah uga jawaab celiyo, >
< start="1102.62" dur="2.25"> xitaa waxyaabaha ugu xun nolosha noloshayda >
< start="1104.87" dur="3.89"> soo saari kara koritaan iyo faa'iidooyin iyo duco, >
< start="1108.76" dur="2.23"> noloshaada iyo noloshayda. >
< start="1110.99" dur="2.26"> Waxay u yimaadaan inay wax soo saaraan. >
< start="1113.25" dur="4.59"> Wuxuu halkaan ka sheegayaa silica iyo walaaca >
< start="1117.84" dur="5"> iyo murugo, haa, iyo xitaa jirro waxbaa kasii bixi kara >
< start="1123.42" dur="2.913"> ee qiimaha leh haddii aan u oggolaanno. >
< start="1127.363" dur="3.887"> Dhammaanteed waxay ku jirtaa xulashadayada, waxay ku jirtaa qaabkeenna. >
< start="1131.25" dur="4.043"> Ilaah wuxuu adeegsadaa dhibaatooyinka nolosheena. >
< start="1136.9" dur="2.33"> Waxaad dhahdaa, hagaag, sidee buu taasi u sameeyaa? >
< start="1139.23" dur="4.04"> Sidee buu Ilaah ugu adeegsadaa dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka nolosheena? >
< start="1143.27" dur="3.29"> Hagaag, waad ku mahadsan tahay weydiinta, maxaa yeelay marinka xiga >
< start="1146.56" dur="1.75"> ama qaybta xigta ee aayadaha ayaa leh >
< start="1148.31" dur="2.61"> in Ilaah u adeegsado saddex qaab. >
< start="1150.92" dur="3.09"> Saddex siyaabood, Ilaah wuxuu adeegsadaa dhibaatooyin noloshaada saddex qaab. >
< start="1154.01" dur="4.18"> Marka hore, dhibaatooyinku waxay tijaabiyaan iimaankayga. >
< start="1158.19" dur="2.03"> Haddaba, iimaankaagu waa sidii muruq. >
< start="1160.22" dur="3.8"> Muruqda lama xoojin karo haddaan la tijaabin, >
< start="1164.02" dur="3.3"> haddii aan la fidin, mooyee mooyee. >
< start="1167.32" dur="4.99"> Ma sameysid muruqyo ad adag adoo aan waxba qabaneyn. >
< start="1172.31" dur="3.09"> Waxaad ku yeelanaysaa murqo xoog leh adoo fidinaya >
< start="1175.4" dur="2.53"> iyo xoojinta iyo tijaabinta >
< start="1177.93" dur="2.7"> oo iyaga ku riixaya ilaa xad. >
< start="1180.63" dur="5"> Markaa wuxuu dhahay dhibaatooyinku waxay u yimaaddaan tijaabinta caqiiddayda. >
< start="1185.88" dur="4.38"> Wuxuu leeyahay ogaada inay u yimaadeen inay tijaabiyaan iimaankaaga. >
< start="1190.26" dur="3.28"> Hadda, tijaabada ereyga isla markiiba, taasi waa eray >
< start="1193.54" dur="5"> Waqtiga Kitaabka Quduuska ah ee loo isticmaali jiray in lagu safeeyo biraha. >
< start="1198.61" dur="3.05"> Wixii aad sameyn lahaydna waxaad qaadan lahayd bir qaali ah >
< start="1201.66" dur="1.768"> sida lacag ama dahab ama wax kale, >
< start="1203.428" dur="2.932"> oo waxaad ku dhex ridi lahayd dheri weyn oo waadna kululayn doontaa >
< start="1206.36" dur="2.54"> heer kul aad u sareeya, sabab? >
< start="1208.9" dur="1.17"> Heerkulka sare, >
< start="1210.07" dur="3.34"> dhammaan nijaastoodii waa la gubay. >
< start="1213.41" dur="4.05"> Waxa kaliya ee harayna waa dahabka saafiga ah >
< start="1217.46" dur="1.946"> ama lacagtii saafiga ahayd. >
< start="1219.406" dur="3.164"> Taasi waa erayga Griiga halkan loogu talagalay tijaabinta. >
< start="1222.57" dur="4.54"> Waa dabka nadiifiya marka Eebbe shido kuleylka >
< start="1227.11" dur="1.705"> oo u oggolaanaya taas nolosheena, >
< start="1228.815" dur="3.345"> Waxay gubtaa alaab aan muhiim ahayn. >
< start="1232.16" dur="2.94"> Waad ogtahay waxa dhici doona toddobaadyada soo socda? >
< start="1235.1" dur="2.134"> Walxaha aan dhammaanteen u malaynnay inay runtii muhiim ahaayeen, >
< start="1237.234" dur="1.726"> waan garwaaqsan nahay, hmm, waan is waafaqay >
< start="1238.96" dur="1.273"> kaliya fiicnayn taas la'aan. >
< start="1241.1" dur="2.51"> Waa dib-u-habayn ku samaynteynna ahmiyadaheenna, >
< start="1243.61" dur="2.41"> maxaa yeelay arrimuhu way isbedelayaan. >
< start="1246.02" dur="4.22"> Hadda, tusaalaha caadiga ah ee sida dhibaatooyinka u tijaabiyaan caqiidadaada >
< start="1251.17" dur="4.02"> waa sheekooyinka ku saabsan Job ee Kitaabka Quduuska ah. >
< start="1255.19" dur="1.75"> Waxaa jira buug dhan oo ku saabsan Job. >
< start="1256.94" dur="3.49"> Waad ogtahay, Ayuub inuu ahaa ninka ugu taajirsan Kitaabka Quduuska ah, >
< start="1260.43" dur="2.74"> maalin keliyana wuu lumay. >
< start="1263.17" dur="2.82"> Wuxuu lumiyey qoyskiisii ​​oo dhan, wuxuu lumiyey maalkiisii ​​oo dhan, >
< start="1265.99" dur="3.97"> dhamaan asxaabtiisi ayuu laayay, argagixisadu waxay weerartay qoyskiisa, >
< start="1269.96" dur="4.567"> Wuxuu helay cudur cabsi badan, oo xanuun daran oo daran >
< start="1276.283" dur="3.437"> taas oo aan la daaweyn karin. >
< start="1279.72" dur="1.323"> Hagaag, isagu waa terminal. >
< start="1282.109" dur="3.721"> Oo haddana, Ilaah baa imtixaamay rumaysadkiisa. >
< start="1285.83" dur="3.27"> Hadana Eebbe dib ayuu u soo celiyaa isaga dhab ahaan labanlaab >
< start="1289.1" dur="3.423"> wixii uu haystay ka hor inta uusan soo marin imtixaanka weyn. >
< start="1293.59" dur="2.82"> Hal mar ayaan aqriyay xigasho meel waqti dheer kahor >
< start="1296.41" dur="2.92"> taas oo uu yiri dadku waa sida bacaha shaaha. >
< start="1299.33" dur="1.34"> Xaqiiqdii garan maysid waxa 'em >
< start="1300.67" dur="2.67"> ilaa aad ku tuurid em biyo kulul. >
< start="1303.34" dur="3.09"> Ka dib markaa waad arki kartaa waxa dhab ahaan ku jira gudaha. >
< start="1306.43" dur="2.77"> Weligaa miyaad waligaa ka mid noqotay maalmahaas biyaha kulul? >
< start="1309.2" dur="3.763"> Weligaa weligaa mid ka mid ah toddobaadyadan ama bilahaas biyo kulul ma ku jirtay? >
< start="1313.82" dur="3.78"> Waxaan ku jirnaa xaalad biyaha kulul hadda. >
< start="1317.6" dur="2.41"> Wixii kugu soo dhacaana waa waxa gudahaaga ku jira. >
< start="1320.01" dur="1.33"> Waa sida cadayga ilkaha. >
< start="1321.34" dur="4.15"> Haddii aan haysto tuubo daawada cadayga oo aan riixo, >
< start="1325.49" dur="1.18"> maxaa ka soo bixi doona? >
< start="1326.67" dur="0.9"> Waxaad tiri, hagaag, cadayga ilkaha. >
< start="1327.57" dur="1.65"> Maya, qasab ma ahan. >
< start="1329.22" dur="1.95"> Waxay dhihi kartaa daawada cadayga ee banaanka, >
< start="1331.17" dur="1.67"> laakiin waxay lahaan kartaa maraqa marinara >
< start="1332.84" dur="2.6"> ama subagga lowska ama majones gudaha. >
< start="1335.44" dur="2.92"> Maxaa ka soo baxa marka cadaadiska la saaro >
< start="1338.36" dur="1.403"> waa wax kasta oo ku jira. >
< start="1341.13" dur="3.603"> Iyo maalmaha soo socda sida aad ula macaamilayso viruska COVID, >
< start="1346.266" dur="2.224"> waxa kaa soo bixi doona waa waxa adiga kugu jira. >
< start="1348.49" dur="2.24"> Oo haddii aad ka buuxdo qadhaadh, taasi way soo bixi doontaa. >
< start="1350.73" dur="2.23"> Oo haddii aad ka buuxdo jahwareer, taasi way soo bixi doontaa. >
< start="1352.96" dur="3.79"> Iyo hadaad ka buuxdo xanaaq ama walwal ama eed >
< start="1356.75" dur="3.46"> ama ceeb ama amni xumo, taasi waa qeyb ka soo baxda. >
< start="1360.21" dur="4"> Haddii aad ka baqdo taasi waa, waxkastoo gudahaaga ah >
< start="1364.21" dur="3.52"> Waa maxay waxa ka soo baxa marka cadaadiska lagaa saaro. >
< start="1367.73" dur="1.44"> Waana taas waxa uu ka leeyahay halkan, >
< start="1369.17" dur="2.23"> Dhibaatooyinkaasna waxay tijaabiyaan iimaankayga. >
< start="1371.4" dur="5"> Waad ogtahay, sanado ka hor, waxaan la kulmay nin oday ah runtii >
< start="1376.98" dur="3.23"> Shir sanado badan ka hor lagu soo noqday Bariga. >
< start="1380.21" dur="1.74"> Waxaan u maleynayaa inuu ahaa Tennessee. >
< start="1381.95" dur="3.91"> Oo isagu, odaygan ayaa ii sheegay sida loo dego >
< start="1387.13" dur="4.8"> ahaa faa iidada ugu weyn noloshiisa. >
< start="1391.93" dur="2.017"> Aniguna waxaan idhi, Waa hagaag, waxaan rabaa inaan maqlo sheekadan. >
< start="1393.947" dur="1.523"> Waxyaabahaas oo dhan ii sheeg. >
< start="1395.47" dur="1.67"> Oo waxay ahayd wuxuu ahaa wuu shaqeeyay >
< start="1397.14" dur="2.823"> alwaax noloshiisa oo dhan. >
< start="1400.83" dur="2.41"> Wuxuu ahaan lahaa miis-dheere noloshiisa oo dhan. >
< start="1403.24" dur="3.34"> Laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaa hoos u dhac dhaqaale uu ku yimid. >
< start="1406.58" dur="3.607"> maamulkiisii ​​ayaa gudaha u galay oo si lama filaan ah ugu dhawaaqay, "Waa lagaa eryay." >
< start="1411.19" dur="3.54"> Aqoontiisa oo dhammuna waxay u baxeen albaabka. >
< start="1414.73" dur="4.62"> Oo waxaa lagu furay isagoo 40 sano jir ah naag >
< start="1419.35" dur="3.85"> iyo qoys iyo ma jiraan fursado kale oo shaqo oo ku xeeran, >
< start="1423.2" dur="2.923"> wakhtigaasna hoos u dhac ayaa ku yimid. >
< start="1427.03" dur="3.5"> Oo isna wuu qalbi jabay, oo isna wuu cabsaday. >
< start="1430.53" dur="1.77"> Qaar idinka mid ah ayaa dareemi kara sidaas oo kale hadda. >
< start="1432.3" dur="1.58"> Waa laga yaabaa in mar hore lagaa saaray. >
< start="1433.88" dur="1.76"> Laga yaabee inaad ka baqeyso inaad noqon doonto >
< start="1435.64" dur="2.63"> la seexday intii lagu jiray qalalaasahan. >
< start="1438.27" dur="2.45"> Oo isna wuxuu ahaa quruxsan niyad jab, wuxuu ahaa cabsi cabsi. >
< start="1440.72" dur="1.827"> Wuxuu yiri, waxaan qorey kan, wuxuu yiri, waxaan dareemay sida >
< start="1442.547" dur="3.97"> Adduunkeygu wuu xanaaqay maalintii la i eryay. >
< start="1446.517" dur="2.2"> "Laakiin markii aan guriga tegey, waxaan u sheegay afadayda wixii dhacay, >
< start="1448.717" dur="3.57"> "oo waxay weydiisay," Maxaad hadda samaynaysaa? ' >
< start="1452.287" dur="2.98"> "Oo waxaan idhi, ka dib markaa tan iyo markii lay eryay, >
< start="1455.267" dur="3.9"> Waxaan sameyn karaa wixii aan markasta doonayay inaan sameeyo. >
< start="1459.167" dur="1.84"> Noqo qof wax dhisa. >
< start="1461.007" dur="1.61"> Waxaan amaahdaynayaa gurigeenna >
< start="1462.617" dur="2.413"> "waxaana ku galayaa ganacsiga dhismaha." >
< start="1465.03" dur="2.887"> Oo isna wuxuu igu yidhi, Waad garanaysaa, Rick, meeshiisii ​​iigu horraysay >
< start="1467.917" dur="4.13"> "wuxuu ahaa dhismaha laba moteel oo yaryar." >
< start="1472.965" dur="2.115"> Taasi waa waxa uu sameeyay. >
< start="1475.08" dur="4.267"> Laakiin wuxuu yidhi, "Shan sano gudahood, waxaan ahaa milyaneer aad u tiro badan." >
< start="1480.21" dur="2.99"> Ninkaasi waa magaca aan la hadlay, >
< start="1483.2" dur="3.5"> wuxuu ahaa Wallace Johnson, iyo ganacsigii uu bilaabay >
< start="1486.7" dur="4.39"> ka dib markii shaqada laga eryay waxaa la odhan jiray Holiday Inns. >
< start="1491.09" dur="1.44"> Meelaha Fasaxyada. >
< start="1492.53" dur="2.877"> Wallace ayaa igu yidhi, "Rick, maanta, haddii aan heli karo >
< start="1495.407" dur="3.13"> "Ninka i eryay, si daacad ah ayaan uhadali lahaa >
< start="1498.537" dur="2.143"> "ku mahadsan wixii uu sameeyay." >
< start="1500.68" dur="2.56"> Waqtigaas markay dhacday, maan fahmin >
< start="1503.24" dur="2.83"> maxaa laygu eryay, maxaa layga saaray. >
< start="1506.07" dur="3.94"> Laakiin markii dambe ayaan arki karayay in ay tahay mid Ilaahay ka yimid >
< start="1510.01" dur="4.483"> iyo qorsho yaab leh oo igu kalifay shaqadii uu doortay. >
< start="1515.76" dur="3.05"> Dhibaatooyinku waa ujeedo. >
< start="1518.81" dur="1.17"> Ujeeddo ayey leeyihiin. >
< start="1519.98" dur="4.18"> Ogaadaan inay u imanayaan wax soo saarka, iyo waxyaalaha ugu horreeya >
< start="1524.16" dur="3.984"> waxay soo saaraan waa iimaan weyn, waxay tijaabinayaan iimaankaaga. >
< start="1528.144" dur="3.226"> Lambarka labaad, waa kan faaiidada labaad ee dhibaatooyinka. >
< start="1531.37" dur="3.27"> Dhibaatooyinku waxay horumariyaan dulqaadashadeyda. >
< start="1534.64" dur="1.52"> Waxay horumariyaan dulqaadkayga. >
< start="1536.16" dur="2.23"> Taasi waa qaybta dambe ee weedha, waxay leedahay >
< start="1538.39" dur="5"> Dhibaatooyinkaasi waxay u yimaadaan inay yeeshaan dulqaad. >
< start="1543.45" dur="2.33"> Waxay ku bartaan adkeysi noloshaada. >
< start="1545.78" dur="1.91"> Waa maxay natiijada dhibaatooyinka noloshaada? >
< start="1547.69" dur="1.52"> Awoodda joogitaanka. >
< start="1549.21" dur="2.82"> Waa macno ahaan awood u leh xallinta cadaadiska. >
< start="1552.03" dur="2.253"> Maanta waxaan ugu yeernaa adkeysi. >
< start="1555.12" dur="1.79"> Awoodda dib loogu laabashada. >
< start="1556.91" dur="3.197"> Iyo mid ka mid ah tayada ugu wanaagsan ee cunug kastaa u baahan yahay inuu barto >
< start="1560.107" dur="3.473"> qofkastoo qaangaar ahna wuxuu ubaahanyahay inuu barto waa adkeysiga. >
< start="1563.58" dur="2.92"> Maxaa yeelay qof kastaa wuu dhacaa, qof walbana wuu turunturoodaa, >
< start="1566.5" dur="2.05"> qof walba wuxuu soo maray waqtiyo adag, >
< start="1568.55" dur="3.31"> qof walbaa waqti ayuu u xanuunsadaa. >
< start="1571.86" dur="2.39"> Qof kastaa wuxuu ku leeyahay guuldarooyinka noloshooda. >
< start="1574.25" dur="2.7"> Waa sideed u maareeysaa cadaadiska. >
< start="1576.95" dur="3.613"> Adkaysi, waad sii wadaysaa kuna sii dheereysaa. >
< start="1581.52" dur="1.99"> Hagaag, sideed ku bartaa inaad taas sameyso? >
< start="1583.51" dur="3.53"> Sideed ku baranaysaa sida loo maareeyo cadaadiska? >
< start="1587.04" dur="2.28"> Khibrad ahaan, taasi waa wadada kaliya. >
< start="1589.32" dur="4.93"> Ma baran doontid inaad wax ka qabato cadaadiska buugga qoraalka. >
< start="1594.25" dur="4.02"> Ma baran kartid sida loo maareeyo cadaadiska seminar. >
< start="1598.27" dur="3.76"> Waxaad baranaysaa sida loo maareeyo cadaadiska adoo cadaadis lagaa saaray. >
< start="1602.03" dur="2.53"> Mana ogaan kartid waxa kugu jira >
< start="1604.56" dur="3.063"> ilaa inta si dhab ah lagugu geliyay xaaladaas. >
< start="1609.77" dur="2.7"> Sannadkii labaad ee Kaniisadda Saddleback, 1981, >
< start="1612.47" dur="1.36"> Waxaan soo maray xilli niyad jab leh >
< start="1613.83" dur="2.823"> halkaas oo toddobaad kasto aan doonayo inaan casilo. >
< start="1617.64" dur="3.88"> Aniguna waxaan rabay inaan joojiyo galab kasta oo axad ah. >
< start="1621.52" dur="3.14"> Hadana waxaan ku jiray waqti adag noloshayda, >
< start="1624.66" dur="2.3"> oo weliba waxaan gelin lahaa hal cag oo horteeda hortiisa >
< start="1626.96" dur="3.19"> sidii Ilaah, ha ii helin inaan dhiso kaniisad weyn, >
< start="1630.15" dur="1.973"> laakiin ilaahow, toddobaadkan i sii. >
< start="1633.01" dur="2.1"> Anigana waan ka quusan lahaa. >
< start="1635.11" dur="2.22"> Aad ayaan ugu faraxsanahay in aanan quusan. >
< start="1637.33" dur="3.09"> Laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay in Ilaah uusan iga quusan. >
< start="1640.42" dur="1.46"> Maxaa yeelay taasi waxay ahayd tijaabo. >
< start="1641.88" dur="5"> Oo intii lagu jiray sannadkaas tijaabada ah, waxaan ku soo baxay xoogaa ruuxiyan ah >
< start="1647.51" dur="3.56"> iyo qaraabo iyo dareen iyo awood maskaxeed >
< start="1651.07" dur="4.28"> taasi waxay ii oggolaatey sannado kadib inaan kubbado dhammaan noocyada kubadaha >
< start="1655.35" dur="4.64"> oo ay wax ka qabtaan culeys aad u badan indhaha dadweynaha >
< start="1659.99" dur="2.01"> maxaa yeelay sanadkaas ayaan soo maray >
< start="1662" dur="3.363"> of guri out out adag, midba midka kale ka kale. >
< start="1666.51" dur="5"> Waad ogtahay, Mareykanku wuxuu la yeeshay xiriir jacayl ah oo ku habboon. >
< start="1672.57" dur="2.113"> Waxaan jecel nahay fududeynta. >
< start="1675.593" dur="3.187"> Maalmaha iyo toddobaadyada ka dambeeya dhibaatadan, >
< start="1678.78" dur="2.58"> waxaa jira waxyaabo badan oo aan isku habboonayn. >
< start="1681.36" dur="1.13"> Aan ku habboonayn. >
< start="1682.49" dur="2.95"> Maxaynu nafteenna ku samayn karnaa? >
< start="1685.44" dur="2.503"> marka wax kastaa aan raaxo lahayn, >
< start="1688.96" dur="2.52"> marka ay tahay inaad kaliya sii wadato >
< start="1691.48" dur="2.1"> markii aadan dareemayn inaad sii wadato. >
< start="1693.58" dur="5"> Waad ogtahay, himilada triathlon ama yoolka marathon-ka >
< start="1698.71" dur="3.1"> runtii maahan xawaaraha, sida ugu dhaqsaha badan ee aad halkaa ku tageysid >
< start="1701.81" dur="1.86"> waa wax badan oo ku saabsan adkaysiga. >
< start="1703.67" dur="2.34"> Miyaad dhammeysaa tartanka? >
< start="1706.01" dur="2.43"> Sidee ayaad ugu diyaarsataa waxyaabaha noocaas ah? >
< start="1708.44" dur="2.13"> Kaliya iyada oo loo maro. >
< start="1710.57" dur="3.487"> Markaa markii lagu kala bixin doono maalmaha soo socda, >
< start="1714.057" dur="2.213"> ha ka welwelin, ha ka welwelin. >
< start="1716.27" dur="3.02"> Dhibaatooyinku waxay horumariyaan dulqaadashadeyda. >
< start="1719.29" dur="3.21"> Dhibaatooyinku waxay leeyihiin ujeedo, waa ujeedo. >
< start="1722.5" dur="2.6"> Waxa saddexaad oo uu James nooga sheegay dhibaatooyinka >
< start="1725.1" dur="3.68"> waxaan soo maraynaa waa in dhibaatooyinku ku waayaan dabeecaddayda. >
< start="1728.78" dur="3.68"> Oo wuxuu ku leeyahay this aayadda afaraad ee James cutubka koowaad. >
< start="1732.46" dur="4.18"> Wuxuu dhahay laakiin, habraaca sii wado >
< start="1736.64" dur="4.49"> ilaa aad noqotid dad dabeecad bisil leh >
< start="1741.13" dur="3.663"> iyo daacadnimo oo aan lahayn dhibco daciif ah. >
< start="1746.3" dur="1.32"> Ma jeclaan lahayd inaad taas lahaato? >
< start="1747.62" dur="2.42"> Ma jeclaan lahayd inaad maqashid dadka dhahaya, waad ogtahay, >
< start="1750.04" dur="3.32"> Naagtaasi ma leedahay dhibco tabar yar oo ku saabsan dabeecaddeeda. >
< start="1753.36" dur="4.53"> Ninkaasi, ninkaas ma leh dhibco daciif ah dabeecaddiisa. >
< start="1757.89" dur="3.04"> Sideed ku heli kartaa dabeecadda noocaas ah ee bisil? >
< start="1760.93" dur="4.58"> Ha sii wado howsha ilaa aad dad ka noqotid, >
< start="1765.51" dur="3.38"> Ragga iyo dumarka, dabeecad wanaagsan >
< start="1768.89" dur="3.33"> iyo daacadnimo oo aan lahayn dhibco daciif ah. >
< start="1772.22" dur="2.6"> Waad ogtahay, waxaa jiray daraasad caan ah oo la sameeyay dad badan, >
< start="1774.82" dur="4"> sanado badan kahor Ruushka inaan xasuusto qorista, >
< start="1778.82" dur="4.08"> waxayna ku reebtay saamaynta sida xaaladaha nololeed ee kaladuwan >
< start="1782.9" dur="5"> saameeyay cimri dheeri ama cimrigii xayawaanada kala duwan. >
< start="1789.11" dur="3.6"> Sidaasi darteedna waxay dhigeen xayawaan xoolo nool. >
< start="1792.71" dur="2.91"> waxayna xoolo kale dhigteen si ka sii adag >
< start="1795.62" dur="1.89"> iyo deegaanno adag. >
< start="1797.51" dur="2.87"> Saynisyahannadana waxay ogaadeen in xayawaanku >
< start="1800.38" dur="2.22"> in la dhigay meel raaxo leh >
< start="1802.6" dur="2.88"> iyo bay'adaha fudud, xaaladaha, >
< start="1805.48" dur="4.73"> xaaladaha nololeed eeas, runti waxay noqdeen daciif. >
< start="1810.21" dur="4.41"> Sababtoo ah shuruudaha aad bay u fududaayeen, way daciif noqdeen >
< start="1814.62" dur="2.22"> iyo u nugul cudurka. >
< start="1816.84" dur="5"> Kuwii ku jiray xaaladaha xasilloonaa si dhakhso leh ayay u dhinteen >
< start="1821.9" dur="2.418"> ka badan kuwa loo oggol yahay inay la kulmaan >
< start="1824.318" dur="3.105"> dhibaatooyinka caadiga ah ee nolosha. >
< start="1828.72" dur="1.163"> Taasi ma xiiso ayey leedahay? >
< start="1830.81" dur="2.2"> Waxa xayawaanku ka run sheegaan waan hubaa inay run yihiin >
< start="1833.01" dur="1.94"> of our dabeecad, sidoo kale. >
< start="1834.95" dur="4.92"> Dhaqanka reer galbeedka gaar ahaan adduunka casriga ah, >
< start="1839.87" dur="3.38"> siyaabo badan ayaan u soo marnay. >
< start="1843.25" dur="1.973"> Nolosha nolol ku habboon. >
< start="1846.94" dur="1.71"> Eebbe yoolka koowaad ee noloshaada >
< start="1848.65" dur="2.67"> waa inuu kaa dhigo sidii Ciise Masiix oo dabeecad ahaan ku dhisan. >
< start="1851.32" dur="1.87"> Si loogu fikiro sida Masiixa, oo aan u dhaqmo sida Masiixa, >
< start="1853.19" dur="3.94"> inaad ugu noolaatid sida Masiix, oo aad u jeclaatid sida Masiixa, >
< start="1857.13" dur="2.2"> inuu noqdo qof wanaagsan sida Masiixa. >
< start="1859.33" dur="3.62"> Hadday taasi run tahay, oo Baybalku sidan leeyahay marar badan, >
< start="1862.95" dur="2.13"> ka dib ayaa Ilaahay kaa qaadi doona isla waxyaabahaas >
< start="1865.08" dur="4.304"> in Ciise dhex maray inuu kobciyo dabeecaddaada. >
< start="1869.384" dur="2.786"> Waxaad tiraahdaa, waa hagaag, muxuu Ciise yahay? >
< start="1872.17" dur="3.8"> Ciise waa jacayl iyo farxad iyo nabad iyo samir iyo naxariis, >
< start="1875.97" dur="2.34"> Midhaha Ruuxa, waxyaalahaas oo dhan. >
< start="1878.31" dur="1.4"> Oo sidee buu Ilaahay u soo saaraa kuwaas? >
< start="1879.71" dur="2.9"> Adoo gelinaya xaalada ka soo horjeedda. >
< start="1882.61" dur="3.76"> Waxaan barannaa samir marka aan isku dayno inaan dulqaadno. >
< start="1886.37" dur="3.37"> Waxaan baranaa jaceylka marka aan xirno dad bilaa naxariis ah. >
< start="1889.74" dur="2.49"> Waxaan baranaa farxadda bartamaha murugada. >
< start="1892.23" dur="4.67"> Waxaan baranaa sida loo sugo oo loo yeesho samirka noocaas ah >
< start="1896.9" dur="1.56"> marka waa inaan sugnaa. >
< start="1898.46" dur="3.423"> Waxaan baranaa naxariis marka la jirrabo oo aan noqono dadnimo. >
< start="1902.77" dur="3.66"> Maalmaha soo socda, waxay noqoneysaa mid aad u xoog badan >
< start="1906.43" dur="2.83"> inaad ugaarsato oo kaliya goob wax lagu dubto, dib u soo gal, >
< start="1909.26" dur="2.54"> oo waxaan idhi, Waan daryeelaynaa. >
< start="1911.8" dur="4.22"> Aniga, nafteyda, iyo aniga, qoyskeyga, anaga afar iyo wax ka badan ma jiraan >
< start="1916.02" dur="2.14"> oo iska ilow qofkasta oo kale. >
< start="1918.16" dur="2.62"> Laakiin taasi naftaada ayaa burburin doonta. >
< start="1920.78" dur="2.51"> Haddii aad bilaabi doonto inaad ka fikirto dadka kale >
< start="1923.29" dur="3.254"> iyo caawinta kuwa nugul, waayeelka >
< start="1926.544" dur="4.026"> iyo kuwa qaba xaalado hore u sii kala sooc lahayn, >
< start="1930.57" dur="3.47"> oo hadaad gaadho naftaada ayaa na kori doonta, >
< start="1934.04" dur="3.34"> Qalbigaagu kori doono, waxaad noqon doontaa qof ka fiican >
< start="1937.38" dur="5"> Dhamaadka xiisaddan sidii ay ahayd bilowgii, ok? >
< start="1943.52" dur="2.98"> Ilaahow, waad aragtay markii uu doonayo inuu dhiso dabeecaddaada, >
< start="1946.5" dur="1.37"> wuxuu isticmaali karaa laba shay. >
< start="1947.87" dur="2.92"> Wuxuu adeegsan karaa Eraygiisa, runta ayaa na beddeleysa, >
< start="1950.79" dur="3.56"> wuuna isticmaali karaa duruufaha, kuwaas oo aad uga adag. >
< start="1954.35" dur="4"> Haddaba, Ilaah ayaa doorbidi lahaa inuu isticmaalo jidka ugu horreeya, Erayga. >
< start="1958.35" dur="1.63"> Laakiin had iyo goor ma dhagaysanno Ereyga, >
< start="1959.98" dur="3.77"> sidaa darteed wuxuu u adeegsadaa duruufaha si aan u helno dareenkeena. >
< start="1963.75" dur="4.6"> Waana ka adag tahay, laakiin inta badan waa ka waxtar badan. >
< start="1968.35" dur="3.23"> Hadda, waxaad tiraahdaa, waa hagaag, ok, Rick, Waan helay, >
< start="1971.58" dur="4.22"> in dhibaatooyinku ay yihiin kuwo isbeddela oo ay u jeeddo leeyihiin, >
< start="1975.8" dur="3.18"> oo waxay halkan u joogaan inay tijaabiyaan caqiidadayda, waana ay noqon doonaan >
< start="1978.98" dur="2.47"> dhammaan noocyada kaladuwan, mana yimaadaan markay rabo 'em. >
< start="1981.45" dur="4.393"> Ilaahayna wuu u adeegsan karaa 'em' si uu u kobciyo dabeecaddayda oo uu noloshayda u kobco >
< start="1986.95" dur="1.72"> Marka maxay tahay inaan sameeyo? >
< start="1988.67" dur="4.94"> Maalmaha soo socda iyo toddobaadyada iyo laga yaabee bilaha soo socda >
< start="1993.61" dur="3.75"> sida aan u wajahayno dhibaatada Coronavirus si wada jir ah, >
< start="1997.36" dur="4.09"> Sideen ugu jawaabaa dhibaatooyinka noloshayda? >
< start="2001.45" dur="1.98"> Aniguna kama hadlayo kaliya viruska. >
< start="2003.43" dur="2.747"> Waxaan ka hadlayaa dhibaatooyinka imaan doona natiijo ahaan >
< start="2006.177" dur="5"> inaad ka maqnaato shaqada ama caruurtu guriga joogaan >
< start="2011.26" dur="3.12"> ama dhammaan waxyaabaha kale ee nolosha murugooda >
< start="2014.38" dur="1.553"> sidii caadiga ahayd. >
< start="2017.04" dur="2.24"> Sideen ugu jawaabaa dhibaatooyinka noloshayda? >
< start="2019.28" dur="2.9"> Hagaag, mar labaad, James waa mid aad u gaar ah, >
< start="2022.18" dur="3.39"> oo isagu wuxuu na siiyaa saddex aad wax ku ool ah, >
< start="2025.57" dur="4.45"> waa jawaabo xag-jir ah, laakiin waa jawaabaha saxda ah. >
< start="2030.02" dur="1.32"> Xaqiiqdii, markaan kuu sheego midka koowaad, >
< start="2031.34" dur="2.21"> waad tagi doontaa, waad iigayaysaa. >
< start="2033.55" dur="3.07"> Laakiin waxaa jira saddex jawaabood, dhammaantood waxay ku bilaabmayaan R. >
< start="2036.62" dur="2.76"> Jawaabta ugu horeysa ee uu dhaho waa goortaad tahay >
< start="2039.38" dur="4.46"> Wakhti adag gudbi, farxa. >
< start="2043.84" dur="2.41"> Waad tagtaa, miyaad qosolaysaa? >
< start="2046.25" dur="1.73"> Taasi waxay u muuqataa masochistic. >
< start="2047.98" dur="2.29"> Ma dhahayo ku farax dhibaatada. >
< start="2050.27" dur="1.69"> Ii raac daqiiqadadan. >
< start="2051.96" dur="3.54"> Wuxuu yiri tixgeli farxaan saafi ah. >
< start="2055.5" dur="2.69"> Dhibaatooyinkan ula dhaqan asxaab ahaan. >
< start="2058.19" dur="1.78"> Haddaba, ha i fahmin. >
< start="2059.97" dur="3.14"> Isagu been ma sheegayo ee waa been abuur. >
< start="2063.11" dur="3.57"> Isagu ma dhahayo dhoola cadeyn balaastiig ah, >
< start="2066.68" dur="2.33"> iska dhig wax kasta inay hagaagsan yihiin oo aysan ahayn, >
< start="2069.01" dur="1.36"> maxaa yeelay maahan. >
< start="2070.37" dur="3.12"> Pollyanna, Orphan Annie, qoraxda >
< start="2073.49" dur="3.512"> soo bixi doona berri, ma laga yaabaa inuu soo baxo berri. >
< start="2077.002" dur="3.568"> Isagu maahan inuu dafiro xaqiiqada, haba yaraatee. >
< start="2080.57" dur="2.76"> Isagu odhan maayo inuu yahay gacaliye. >
< start="2083.33" dur="2.87"> Wiil yahow, xanuun baan qabaa. >
< start="2086.2" dur="1.72"> Eebbe wuu neceb yahay xanuunka inta aad jeceshahay. >
< start="2087.92" dur="2.1"> Oh, Waxaan u xanuunsanayaa, sixi >
< start="2090.02" dur="3.49"> Oo waxaad leedahay dhismaha shahiidnimo, oo waad ogtahay, >
< start="2093.51" dur="1.937"> Kaliya waxaan hayaa dareenkan ruuxiga ah markaan dareemayo xumaan. >
< start="2095.447" dur="2.983"> Maya, maya, maya, Ilaah ma doonayo in aad shahiid noqoto. >
< start="2098.43" dur="1.54"> Eebbe ma doonayo inaad lahaato >
< start="2099.97" dur="3.453"> dabeecadda masochistic ee xanuunka. >
< start="2104.74" dur="2.5"> Waad ogtahay, Waxaan xasuustaa hal jeer oo aan soo maray >
< start="2107.24" dur="3.21"> waqti adag runti iyo saaxiib wuxuu isku dayey inuu naxariis yeesho >
< start="2110.45" dur="2.307"> oo waxay ku yidhaahdeen, Waad og tahay, Roobow, kalsoonow >
< start="2112.757" dur="1.86"> "maxaa yeelay arrimuhu way ka sii xumaan karaan." >
< start="2115.61" dur="2.14"> Oo bal qiyaas waxa, ay sii xumaadeen. >
< start="2117.75" dur="2.23"> Taasi wax gargaar ah gabi ahaanba ma jirin. >
< start="2119.98" dur="2.225"> Waan faraxsanahay wayna sii xumaadeen. >
< start="2122.205" dur="1.105"> (cufan) >
< start="2123.31" dur="4.588"> Marka maahan fikir been abuur ah oo Pollyanna laga fikirayo. >
< start="2127.898" dur="3.352"> Haddii aan u dhaqmo si xamaasad leh, waan ku farxi doonaa. >
< start="2131.25" dur="2.88"> Maya, maya, maya, maya, way badantahay, aad ayey uga qoto dheer tahay intaas. >
< start="2134.13" dur="5"> Kuma faraxsani, ma dhagaysanno, kuma faraxsani dhibaatada. >
< start="2140.17" dur="5"> Waxaan ku faraxsanahay dhibaatada, inta aan dhibaatada ku jirno, >
< start="2145.71" dur="2.13"> weli waxaa jira waxyaabo badan oo lagu farxo. >
< start="2147.84" dur="2.92"> Dhibaatada lafteeda maahan, laakiin waxyaabaha kale >
< start="2150.76" dur="2.514"> in aan ku farxi karno dhibaatooyinka. >
< start="2153.274" dur="2.836"> Maxaynu ugu farxi karnaa xitaa dhibaatada? >
< start="2156.11" dur="2.54"> Sababta waxaan ognahay inay ujeedo leedahay. >
< start="2158.65" dur="1.74"> Sababtoo ah waxaan ognahay in Ilaah uusan inaga tagi doonin. >
< start="2160.39" dur="2.97"> Sababtoo ah waxaan ognahay waxyaabo badan oo kala duwan. >
< start="2163.36" dur="1.81"> Waxaan ognahay in Ilaah leeyahay ujeedo. >
< start="2165.17" dur="4.58"> Fiiro u yeelo wuxuu leeyahay tixgeli farxaan saafi ah. >
< start="2169.75" dur="1.98"> Goobo geli erayga tixgelinta. >
< start="2171.73" dur="4.8"> Tixgeli macnaha inaad si kas ah u sameyso maskaxdaada. >
< start="2176.53" dur="2.22"> Waxaad heshay is-hagaajin dabeecadeed >
< start="2178.75" dur="1.71"> in aad tahay inaad halkaan sameyso. >
< start="2180.46" dur="3.869"> Ma tahay doorashadaada inaad ku faraxdo? >
< start="2184.329" dur="3.201"> Sabuurradii 34 aayadda koowaad, wuxuu leeyahay >
< start="2187.53" dur="3.69"> Wakhti kasta ayaan Rabbiga ammaani doonaa, >
< start="2191.22" dur="1.39"> Waqtiyada oo dhan. >
< start="2192.61" dur="0.92"> Isna wuxuu yidhi, Waan doonayaa. >
< start="2193.53" dur="2.48"> Waa doorashada doonista, waa go'aan. >
< start="2196.01" dur="1.66"> Waa ballanqaad, waa doorasho. >
< start="2197.67" dur="4.08"> Hadda, waad iska dhex bixi doontaa bilaha soo socda >
< start="2201.75" dur="2.4"> oo leh dhaqan wanaagsan ama dhaqan xumo. >
< start="2204.15" dur="2.7"> Haddii fikirkaagu xun yahay, waad isqarxin doontaa naftaada >
< start="2206.85" dur="2.35"> iyo dadka kale ee kugu xeeran murugaysan. >
< start="2209.2" dur="3.15"> Laakiin haddii fikirkaagu fiican yahay, doorashadaada ayaa ah inaad ku faraxdo. >
< start="2212.35" dur="1.76"> Waxaad leedahay, aan eegno dhinaca ifaya. >
< start="2214.11" dur="3.09"> Aynu helno waxyaalaha aan uga mahadcelin karno Ilaah. >
< start="2217.2" dur="2.15"> Oo aan xaqiiqsanaa in xitaa kuwa xun, >
< start="2219.35" dur="2.88"> Eebbe wanaagga ka soo bixiyo. >
< start="2222.23" dur="2.29"> Marka samee isku hagaajinta dabeecadda. >
< start="2224.52" dur="3.25"> Kama murugoodo dhibaatadan. >
< start="2227.77" dur="3.23"> Waxaan ku fiicnaan doonaa xiisadan. >
< start="2231" dur="4.39"> Waan dooranayaa, waa doorashadayda inaan ku farxo. >
< start="2235.39" dur="3.41"> Hagaag, lambarka labaad, kan labaad R waa codsi. >
< start="2238.8" dur="4.08"> Taasina waa weydiisashada xigmadda Eebbe. >
< start="2242.88" dur="3.29"> Tan ayaa ah waxa aad rabto inaad sameyso markasta oo aad dhibaato ku jirto. >
< start="2246.17" dur="2.39"> Waxaad rabtaa inaad weydiisato xigmad. >
< start="2248.56" dur="2.1"> Toddobaadkii hore, haddii aad dhegeysatay farriinta usbuucii la soo dhaafay, >
< start="2250.66" dur="2.72"> haddii aad seegtayna dib ugu noqo khadka tooska ah ee taleefanka ka daawo oo eeg >
< start="2253.38" dur="5"> iyadoo laga sii marayo dooxada fayras cabsi la'aan. >
< start="2260.09" dur="2.15"> Waa doorashadaada inaad ku faraxdo, >
< start="2262.24" dur="2.733"> laakiin markaa waxaad weydiisataa xigmad. >
< start="2265.89" dur="2.13"> Oo waxaad weydiisataa xigmad oo waad tukataa >
< start="2268.02" dur="1.51"> adigana waad ka duceysaa dhibaatooyinkaaga. >
< start="2269.53" dur="2.99"> Aayadda toddobaad ayaa tan ku leh Yacquub mid. >
< start="2272.52" dur="4.83"> Haddii howshan gudaheeda midkiin uusan aqoon sida loo kulmo >
< start="2277.35" dur="4.05"> dhibaato kasta oo gaar ah, tani waxay ka baxsan tahay tarjumaadda Phillips. >
< start="2281.4" dur="2.24"> Haddii howsha gudaheeda midkiin uusan aqoon sida loo kulmo >
< start="2283.64" dur="3.44"> dhibaato kasta oo gaar ah waa inaad Ilaahay weydiisataa oo keliya >
< start="2287.08" dur="2.65"> oo deeqsi ah siiya dadka oo dhan >
< start="2289.73" dur="2.6"> adigoon ka dhigin inay dareemaan dambi. >
< start="2292.33" dur="3.45"> Waxaana laga yaabaa inaad hubto in xikmadda lagama maarmaanka ah >
< start="2295.78" dur="1.963"> waa lagu siin doonaa. >
< start="2298.65" dur="2.18"> Waxay igu dhahaan sababta aan wax kasta u weydiisan lahaa xigmad >
< start="2300.83" dur="1.35"> dhexda dhibaato? >
< start="2303.29" dur="2.07"> Marka waxaad ka baranaysaa. >
< start="2305.36" dur="1.57"> Markaa waad ka baran kartaa dhibaatada, >
< start="2306.93" dur="1.48"> Taasi waa sababta aad u weydiisato xigmad. >
< start="2308.41" dur="4.26"> Way ku caawin badan tahay haddii aad joojiso weydiinta sababta, >
< start="2312.67" dur="3.04"> maxay tani u dhacaysaa, oo u bilow inaad isweydiiso, >
< start="2315.71" dur="1.45"> maxaad rabtaa inaan barto? >
< start="2318.09" dur="1.92"> Maxaad rabtaa inaan noqdo? >
< start="2320.01" dur="2.27"> Sideen uga kori karaa tan? >
< start="2322.28" dur="2.17"> Sideen ugu noqon karaa naag wanaagsan? >
< start="2324.45" dur="4.51"> Sideen ugu noqon karaa nin ka sii fiican dhibaatadan? >
< start="2328.96" dur="1.32"> Haa, waa la i baarayaa. >
< start="2330.28" dur="1.53"> Kama walwalayo sababta. >
< start="2331.81" dur="1.71"> Maxay runtii xitaa muhiim u tahay >
< start="2333.52" dur="3.77"> Waxa muhiimka ahi waa maxay, maxaan noqdaa >
< start="2337.29" dur="3.7"> oo maxaan ka baran karaa xaaladdan? >
< start="2340.99" dur="2.71"> Si taas loo sameeyona, waxaad heli doontaa xigmad. >
< start="2343.7" dur="2.56"> Markaa wuxuu dhahay markasta oo aad u baahatid xigmad, Ilaah weydiiso, >
< start="2346.26" dur="1.61"> Ilaahay xoogaa ha ku siiyo. >
< start="2347.87" dur="2.2"> Markaa waxaad leedahay, Ilaahow, waxaan ubaahanahay xigmad sidii hooyaday oo kale. >
< start="2350.07" dur="3.23"> Caruurtaydu waxay joogi doonaan guriga bisha soo socota. >
< start="2353.3" dur="2.22"> Waxaan ubaahanahay xigmad sida aabe. >
< start="2355.52" dur="3.48"> Sideen u hogaamiyaa markaan shaqooyinkeenna khatar ku jiraan >
< start="2359" dur="1.553"> oo hadda ma shaqeyn karo? >
< start="2362.05" dur="1.45"> Weydiiso xigmad >
< start="2363.5" dur="1.84"> Ha weydiinin sababta, laakiin weydii waxa. >
< start="2365.34" dur="2.99"> Marka marka hore waad farxeysaa, waxaad heleysaa aragti wanaagsan >
< start="2368.33" dur="3.14"> odhaahda waan ku mahadnaqayaa Ilaahay dhibta, >
< start="2371.47" dur="3.14"> laakiin waan ku mahadnaqayaa Ilaahay dhibaatada. >
< start="2374.61" dur="2.92"> Sababtoo ah wanaagga Ilaah xitaa markuu nolosha nuugo. >
< start="2377.53" dur="2.137"> Taasi waa sababta aan ugu yeerayo taxanahan >
< start="2379.667" dur="5"> "Iimaan dhab ah oo shaqeeya marka noloshu aysan shaqeynin." >
< start="2385.41" dur="1.473"> Markay noloshu shaqeyn weydo. >
< start="2387.96" dur="1.69"> Markaa waan ku farxaa oo waan weyddiistaa. >
< start="2389.65" dur="4.32"> Waxa seddexaad ee James yiraahdo inuu sameeyo waa nasasho. >
< start="2393.97" dur="4.83"> Haa, sida kiinad u degganaan, ha helin naftaada >
< start="2398.8" dur="3.86"> kulligood waxay ku taal tuulmo dareemeyaal ah. >
< start="2402.66" dur="2.64"> Ha ku kicin culeys badan oo aadan waxba sameyn karin. >
< start="2405.3" dur="1.33"> Ha ka welwelin mustaqbalka. >
< start="2406.63" dur="2.83"> Ilaah wuxuu yidhi waan ku xanaanayn doonaaye, i aamin >
< start="2409.46" dur="2.42"> Waxaad ku kalsoonahay inaad ogaatay waxa ugu fiican. >
< start="2411.88" dur="2.17"> Waxaad isaga kaashanaysaa isaga. >
< start="2414.05" dur="4.84"> Ha ka gaabin xaaladda aad ku dhex marayso. >
< start="2418.89" dur="3.07"> Laakiin waxaad dhahdaa, Ilaahow waan nasan doonaa. >
< start="2421.96" dur="2.28"> Shaki kuma qabo. >
< start="2424.24" dur="1.87"> Shaki kuma qabo. >
< start="2426.11" dur="2.76"> Waxaan kugu kalsoonahay xaaladaan. >
< start="2428.87" dur="3.15"> Aayadda sideed waa aayadda ugu dambaysa ee aan eegno. >
< start="2432.02" dur="1.26"> Hagaag, waxaan eegi doonaa hal in ka badan daqiiqad gudaheed. >
< start="2433.28" dur="5"> Laakiin aayadda siddeedaad waxay leedahay, laakiin waa inaad iimaanka ku weydisaa >
< start="2438.9" dur="2.49"> shaki la’aan qarsoon. >
< start="2441.39" dur="1.86"> Maxaad iweydiisanaysaa adigoo aamin ah? >
< start="2443.25" dur="1.57"> Weydiiso xigmad. >
< start="2444.82" dur="2.07"> Oo waxaad tidhaahdaa, Ilaahow, waxaan u baahanahay xigmad, oo waan ku mahad naqayaa >
< start="2446.89" dur="1.26"> adigu waad i siinaysaa xigmadda. >
< start="2448.15" dur="2.89"> Waan ku mahadsan yahay, waxaad i siisay xigmad. >
< start="2451.04" dur="3.06"> Ha xoqin, hana shakiyin, >
< start="2454.1" dur="2.57"> laakiinse u bixi xagga Ilaah. >
< start="2456.67" dur="5"> Waad ogtahay, Baybalku wuxuu leeyahay, horaan markii aan tilmaanay >
< start="2461.67" dur="3.24"> in ay tiri dhibaatooyinka noocaan oo kale ah. >
< start="2464.91" dur="1.8"> Waad ogtahay, waxaan ka wada hadalnaa inay iskula mid yihiin, >
< start="2466.71" dur="2.23"> dhibaatooyin badan oo kala duwan. >
< start="2468.94" dur="2.81"> Ereygaas oo Giriig ah, noocyo badan oo dhibaato ah, >
< start="2471.75" dur="3.11"> waa isla ereyga lagu daboolay First Butros >
< start="2474.86" dur="1.97"> cutubka afaraad, aayadda afaraad oo yiri >
< start="2476.83" dur="4.11"> Ilaah nimcooyin badan baa ku siiya. >
< start="2480.94" dur="3.35"> Noocyada badan ee Eebbe. >
< start="2484.29" dur="5"> Waa isla midabbo kala duwan, isku dhafan, sida dheeman. >
< start="2489.339" dur="1.694"> Muxuu ku odhanayaa halkaa? >
< start="2492.28" dur="2.08"> Dhibaato kasta oo aad haysato, >
< start="2494.36" dur="2.87"> waxaa jirta nimco xagga Eebbe laga helo. >
< start="2497.23" dur="5"> Nooc kasta oo badan oo ah tijaabo iyo dhib >
< start="2502.74" dur="4.5"> iyo dhib, waxaa jira nooc nimco iyo naxariis leh >
< start="2507.24" dur="2.25"> iyo awooda uu Eebbe doonayo inuu ku siiyo >
< start="2509.49" dur="2.05"> si loo waafajiyo dhibaatadaas gaarka ah. >
< start="2511.54" dur="2.04"> Waxaad ubaahantahay nimco taas, waxaad ubaahantahay nimco taas, >
< start="2513.58" dur="1"> waxaad ubaahantahay nimco >
< start="2514.58" dur="3.76"> Ilaah wuxuu yiri nimcadaydu waa sida multifeatured >
< start="2518.34" dur="1.99"> sida dhibaatooyinka aad wajahayso. >
< start="2520.33" dur="1.27"> Marka maxaan idhaahdaa? >
< start="2521.6" dur="1.74"> Waxaan dhahayaa dhamaan dhibaatooyinka noloshaada, >
< start="2523.34" dur="2.44"> oo ay ku jiraan xiisaddan COVID, >
< start="2525.78" dur="4.03"> Ibliis macnaheedu waa inuu kugula adkaado dhibaatooyinkaas. >
< start="2529.81" dur="4.41"> Laakiin Ilaah macnaheedu waa inuu kugu horumariyo dhibaatooyinkaan. >
< start="2534.22" dur="3.543"> Wuxuu doonayaa inuu kugu adkaado, Shayddaan, laakiin Ilaah wuxuu doonayaa inuu ku horumariyo. >
< start="2539.44" dur="2.12"> Haddaba, dhibaatooyinka soo gala noloshaada >
< start="2541.56" dur="3.34"> si toos ah ha uga dhigin qof wanaagsan. >
< start="2544.9" dur="2.51"> Dad aad u badan ayaa noqday dad qadhaadh 'em. >
< start="2547.41" dur="3.28"> Si otomaatig ah kaama dhigayso qof fiican. >
< start="2550.69" dur="2.96"> Waa dabeecaddaada isbedel sameysa. >
< start="2553.65" dur="2.86"> Waana meesha aan rabo inaan ku siiyo wax kale oo aad ku xasuusato. >
< start="2556.51" dur="3.07"> Lambarka afraad, shayga afaraad ee la xasuusto >
< start="2559.58" dur="3.75"> marka aad ku dhexjirtid dhibaatooyin waa inaad xasuusataa >
< start="2563.33" dur="1.99"> ballamaha Eebbe. >
< start="2565.32" dur="1.84"> Xusuusnow ballamihii Ilaah. >
< start="2567.16" dur="1.28"> Taasi waxay ku dhacday aayadda 12aad. >
< start="2568.44" dur="1.52"> Bal aan kuu akhriyo ballankan. >
< start="2569.96" dur="2.363"> Yacquub cutubka koowaad, aayadda 12aad. >
< start="2573.55" dur="5"> Waxaa barakaysan ninkii dulqaadashada garta, >
< start="2579.84" dur="2.67"> maxaa yeelay markii uu imtixaanka istaagay, >
< start="2582.51" dur="5"> wuxuu heli doonaa taajka nolosha ee Ilaah ballanqaaday, >
< start="2587.82" dur="2.75"> waxaa jira ereyga, kuwa isaga jecel. >
< start="2590.57" dur="0.833"> Aan markale akhriyo. >
< start="2591.403" dur="2.057"> Waxaan rabaa inaad dhegeysiga si dhow u dhagaysato. >
< start="2593.46" dur="5"> Waxaa barakaysan ninkii dulqaadashada garta, >
< start="2598.84" dur="3.36"> Ayaa wax ka qabta dhibaatooyinka, >
< start="2602.2" dur="2.12"> sida xaalada aan hada ku suganahay. >
< start="2604.32" dur="3.67"> Waxaa barakaysan ninkii adkaysta, oo adkaysta, >
< start="2607.99" dur="3.87"> Oo isagu waa kii rumaysta Ilaah, oo rumeeya kan jirrabaadda. >
< start="2611.86" dur="3.12"> maxaa yeelay markii uu istaagay imtixaanka, soo baxa >
< start="2614.98" dur="2.72"> dhinaca dambe, tijaabadan ma ahan mid soconaya. >
< start="2617.7" dur="1.4"> Dhamaad baa jirta. >
< start="2619.1" dur="2.07"> Waxaad ka soo bixi doontaa dhamaadka dariiqa kale. >
< start="2621.17" dur="4.41"> Waxaad heli doontaa taajka nolosha. >
< start="2625.58" dur="3.38"> Hagaag, xitaa ma aqaano waxa taasi micnaheedu yahay, laakiin waa wax fiican. >
< start="2628.96" dur="2.7"> Oo taajka nolosha ee Ilaah ballan qaaday >
< start="2631.66" dur="2.373"> kuwa isaga jecel. >
< start="2635.73" dur="2.32"> Waa doorashadaada inaad ku faraxdo. >
< start="2638.05" dur="2.92"> Waa doorashadaada inaad ku aaminto xigmadda Eebbe >
< start="2640.97" dur="1.72"> halkii laga shakin lahaa. >
< start="2642.69" dur="4.21"> Weydiiso xigmad inuu kaa caawiyo xaaladaada. >
< start="2646.9" dur="3.23"> Hadana Ilaahay ka barya inuu iimaanka adkaysto. >
< start="2650.13" dur="2.27"> Oo waxaad tidhaahdaa, Ilaahow, quusan maayo. >
< start="2652.4" dur="1.793"> Taasuna way dhammaan doontaa. >
< start="2655.329" dur="2.111"> Qof baa mar la weydiiyay, waa maxay waxa aad ugu jeceshahay >
< start="2657.44" dur="0.833"> aayadda Kitaabka Quduuska ah? >
< start="2658.273" dur="1.297"> Ayuu yidhi, way noqotay. >
< start="2659.57" dur="1.273"> Oo maxaad u jeceshahay aayaddaas? >
< start="2660.843" dur="2.687"> Sababta oo ah markay dhibaatooyinku yimaadaan, waxaan ogahay inaysan u imaan inay joogaan. >
< start="2663.53" dur="1.194"> Wayna kala noqdeen. >
< start="2664.724" dur="1.116"> (cufan) >
< start="2665.84" dur="2.88"> Taasina waa run xaaladdan gaarka ah. >
< start="2668.72" dur="3.983"> Maahan in la joogo, waa la soo afjarayaa. >
< start="2673.56" dur="2.24"> Hadda, waxaan rabaa in aan ku dhawaado fikirkaan. >
< start="2675.8" dur="3.77"> Dhibaatadu kaliya maahan inay dhibaatooyin abuurto. >
< start="2679.57" dur="3.23"> Had iyo jeer way kashifaa, badiyaa way isa soo shaacbixisaa. >
< start="2682.8" dur="4.563"> Dhibaatadan waxay shaaca ka qaadi kartaa dildilaacyada qaar ee guurkaaga. >
< start="2688.77" dur="2.76"> Dhibaatadan waxay muujin kartaa dildilaaca qaar >
< start="2691.53" dur="1.823"> xiriirka aad la leedahay Ilaah. >
< start="2694.26" dur="5"> Dhibaatadan waxay daaha ka qaadi kartaa qaar ka mid ah dildilaaca hab-nololeedkaaga, >
< start="2699.29" dur="2.593"> in aad tahay qof si adag isu riixaya. >
< start="2702.949" dur="3.181"> Markaa diyaar u noqo inaad u oggolaatid in Ilaah kula hadlo >
< start="2706.13" dur="5"> ku saabsan waxa loo baahan yahay in la beddelo noloshaada, waa hagaag? >
< start="2711.45" dur="1.7"> Waxaan rabaa inaad ka fikirto toddobaadkan, >
< start="2713.15" dur="3.44"> oo aan ku siiyo tillaabooyin wax ku ool ah, ok? >
< start="2716.59" dur="2.47"> Talaabooyinka la taaban karo, midka koowaad, waan ku doonayaa >
< start="2719.06" dur="5"> inaad qof kale ku dhiirrigeliso inuu dhageysto fariintan. >
< start="2724.55" dur="1.25"> Miyaad sameyn doontaa taasi? >
< start="2725.8" dur="3.603"> Ma ku xiri doontaa xiriirinkan oo u diri saaxiib? >
< start="2729.403" dur="3.337"> Haddii ay taasi kugu dhiirrigelisay, sii gudub, >
< start="2732.74" dur="2.3"> oo dhiirrigeli toddobaadkan. >
< start="2735.04" dur="4.84"> Dhamaan dadka kugu xeeran waxay u baahan yihiin dhiirigalin inta lagu jiro xiisadan. >
< start="2739.88" dur="1.779"> Marka u dir 'em isku xirka. >
< start="2741.659" dur="5"> Laba usbuuc ka hor markii aan kaniisad ku leenahay xeryahayaga, >
< start="2747.52" dur="3.11"> harada Lake iyo dhammaan xarumaheena kale ee Saddleback, >
< start="2750.63" dur="3.53"> qiyaastii 30,000 oo qof ayaa ka soo muuqday kaniisadda. >
< start="2754.16" dur="4.14"> Laakiin usbuucii la soo dhaafay markii ay ahayd inaan joojino adeegyada >
< start="2758.3" dur="1.87"> oo kulligeen waxaan ku qasbanahay inaan ku daawano khadka internetka, waxaan is idhi, >
< start="2760.17" dur="3.38"> qof kasta wuxuu u tagaa kooxdaada yar wuxuuna ku martiqaadaa deriskaaga >
< start="2763.55" dur="2.94"> saaxiibbana ku martiqaada kooxdaada yar, >
< start="2766.49" dur="0.95"> waxaan haysannay 181,000 >
< start="2767.44" dur="5"> ISPs ee guryaheena ku xiran adeegga. >
< start="2776.3" dur="3.41"> Taasi micnaheedu waa malaayiin nus milyan dad ah >
< start="2779.71" dur="1.96"> daawaday fariinti usbuucii la soo dhaafay. >
< start="2781.67" dur="3.04"> Nus milyan qof iyo in ka badan. >
< start="2784.71" dur="3.63"> Sababta, maxaa yeelay waxaad u sheegtay qof kale inuu daawado. >
< start="2788.34" dur="4.56"> Aniguna waxaan rabaa inaan kugu dhiiri galiyo inaad markhaati ka noqoto wararka wanaagsan >
< start="2792.9" dur="2.79"> Toddobaadkan adduunyo aad ugu baahan war wanaagsan. >
< start="2795.69" dur="1.4"> Dadku waxay u baahan yihiin inay tan maqlaan. >
< start="2797.09" dur="1.18"> Udir dir. >
< start="2798.27" dur="5"> Waxaan aaminsanahay inaan ku dhiiri gelin karno hal milyan oo qof toddobaadkan >
< start="2803.29" dur="3.8"> hadaan dhammaanteen farriin ku gudbino, ok? >
< start="2807.09" dur="3.16"> Lambarka labaad, hadaad ku jirtid koox yar, ma awoodno >
< start="2810.25" dur="3.45"> awoodaan inaad la kulanto, ugu yaraan bishaan, taasi waa hubaal. >
< start="2813.7" dur="3.95"> Aniguna sidaas darteed waxaan kugu dhiiri gelin lahaa inaad sameysato kulan dalwad. >
< start="2817.65" dur="1.79"> Waad helikartaa koox internetka ah. >
< start="2819.44" dur="0.97"> Sideed taas u sameysaa? >
< start="2820.41" dur="2.63"> Hagaag, waxaa jira waxyaabo soo baxay sida Zoom. >
< start="2823.04" dur="2.52"> Waxaad dooneysaa inaad taas hubiso, Zoom, waa bilaash. >
< start="2825.56" dur="2.56"> Adiguna halkaas ayaad tagi kartaa oo u sheegi kartaa qof walba inuu helo Zoom >
< start="2828.12" dur="1.74"> taleefankooda ama kombiyuuterkooda, >
< start="2829.86" dur="3.58"> iyo waxaad ku xiriirin kartaa lix ama sideed ama 10 qof, >
< start="2833.44" dur="3.15"> waana inaad kooxdaada ku lahaan kartaa toddobaadkan Zoom. >
< start="2836.59" dur="3.19"> Waadna arki kartaa weji kale, sida Facebook Live, >
< start="2839.78" dur="2.933"> ama waa sida qaar kale, waad ogtahay, >
< start="2844.84" dur="5"> waxa ku jira iPhone marka aad fiiriso FaceTime. >
< start="2850.12" dur="1.82"> Hagaag, taas kuma sameyn kartid koox weyn, >
< start="2851.94" dur="2.39"> laakiin waxaad ku sameyn kartaa hal qof. >
< start="2854.33" dur="3.52"> Oo sidaas daraaddeed ku dhiirrigeli midba midka kale in weji wejiga iyada oo loo marayo farsamada. >
< start="2857.85" dur="2.66"> Waxaan hadda haysannaa tikniyolojiyad aan la heli karin. >
< start="2860.51" dur="3.59"> Marka iska hubi Zoom koox yar oo astaan ​​ah. >
< start="2864.1" dur="1.17"> Oo runtii halkan internetka >
< start="2865.27" dur="1.85"> waxaad heli kartaa xoogaa macluumaad ah sidoo kale. >
< start="2867.12" dur="3.244"> Saddex lambar, haddii aadan ku jirin koox yar, >
< start="2870.364" dur="4.096"> Waxaan kaa caawin doonaa inaad gasho koox khadka tooska ah ee toddobaadkan, waan ku caawin doonaa. >
< start="2874.46" dur="2.33"> Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa iimayl ahaan, >
< start="2876.79" dur="3.225"> WadajirRick@saddleback.com. >
< start="2880.015" dur="4.815"> PastorRick @ saddleback, hal-erey, SADDLEBACK, >
< start="2884.83" dur="2.81"> saddleback.com, oo waan kugu xiri doonaa >
< start="2887.64" dur="2.57"> koox khadka tooska ah, sax ma tahay? >
< start="2890.21" dur="2.79"> Markaa iska hubi haddii aad tahay qayb ka mid ah Kaniisada Saddleback >
< start="2893" dur="2.84"> si aad u aqrisato joornaalkaaga maalinlaha ah ee aan dirayo >
< start="2895.84" dur="2.03"> maalin kasta inta lagu jiro qalalaasahan. >
< start="2897.87" dur="2.1"> Waxaa lagu magacaabaa "Saddleback at Home." >
< start="2899.97" dur="3.5"> Waxay leedahay talooyin, waxay leedahay farriimo dhiirrigelin leh, >
< start="2903.47" dur="2.14"> waxaa helay war aad isticmaali karto. >
< start="2905.61" dur="1.56"> Wax aad u ficil ah. >
< start="2907.17" dur="2.17"> Waxaan jecel nahay inaan kula xiriirayno maalin kasta. >
< start="2909.34" dur="1.32"> Hel "Saddleback guriga." >
< start="2910.66" dur="2.69"> Haddii aanan haysan cinwaanka emaylkaaga, >
< start="2913.35" dur="1.42"> markaa ma helayso. >
< start="2914.77" dur="2.46"> Adigana waad igu soo diri kartaa cinwaanka emaylkaaga >
< start="2917.23" dur="4.41"> si aad uhesho PastorRick@saddleback.com, oo waxaan kugu dari doonaa liiska, >
< start="2921.64" dur="2.37"> oo waxaad heli doontaa xiriir maalinle ah, >
< start="2924.01" dur="3.76"> warsidaha maalinlaha ah ee "Saddleback in Home". >
< start="2927.77" dur="2.09"> Kaliya waxaan doonayaa inaan xiro ka hor intaanan tukanin >
< start="2929.86" dur="2.15"> adoo mar kale dhahaya inta aan ku jeclahay >
< start="2932.01" dur="1.72"> Maalin kasta waan kuu ducaynayay, >
< start="2933.73" dur="1.9"> waanan kusii socon doonaa ducadaada. >
< start="2935.63" dur="2.68"> Arrintan ayaan isla meel marin doonnaa. >
< start="2938.31" dur="2.33"> Tani ma aha dhamaadka sheekada. >
< start="2940.64" dur="3.4"> Ilaah weli carshigiisii ​​buu ku fadhiyaa, oo Ilaah baa adeegsan doona tan >
< start="2944.04" dur="4.16"> si aad u kobciso iimaankaaga, oo aad dadka u soo gaarto iimaan. >
< start="2948.2" dur="1.8"> Oo yaa yaqaan waxa dhici doona. >
< start="2950" dur="3.07"> Waxaan ka heli karnaa nooleynta ruuxiga ah waxaas oo dhan >
< start="2953.07" dur="2.66"> maxaa yeelay dadku badanaa waxay u jeestaan ​​xagga Ilaah >
< start="2955.73" dur="1.87"> markay marayaan waqtiyo adag. >
< start="2957.6" dur="1.09"> Aan kuu duceeyo >
< start="2958.69" dur="1.66"> Aabe, waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo qofkasta >
< start="2960.35" dur="1.48"> yaa dhageysanaya hadda. >
< start="2961.83" dur="5"> Aan noolaanno farriinta Yacquub cutubka koowaad, >
< start="2967.39" dur="2.78"> lix ama toddobada aayadood ee ugu horreeya. >
< start="2970.17" dur="4.25"> Aan baranno inay dhibaatooyinku yimaadaan, ay wax dhacayaan, >
< start="2974.42" dur="5"> waa kuwa isbedbeddelaya, waa kuwo ujeeddo leh, iyo inaad wax kasbanayso >
< start="2979.81" dur="2.41"> u adeegso iyaga wax wanaagsan nolosheenna haddii aan adiga ku aamini doonno. >
< start="2982.22" dur="1.49"> Naga caawi inaanu shakin. >
< start="2983.71" dur="4"> Naga caawi inaan ku faraxno, weydiisanno, Sayidow, >
< start="2987.71" dur="3.53"> iyo in lagu xasuusto ballanqaadyadaada. >
< start="2991.24" dur="3.45"> Aniguna waxaan u duceynayaa qof walba inay lahaadaan usbuuc caafimaad qaba. >
< start="2994.69" dur="2.87"> Magaca Ciise, aamiin. >
< start="2997.56" dur="1.07"> Ilaahay ha idin barakeeyo, qofkasta. >
< start="2998.63" dur="1.823"> U gudbi qof kale. >